(၂) အမွှေးအကြိုင်များကို အကန့်အသတ်ဖြင့် သာသုံးပါ။
အကယ်၍ အမွှေးနံ့ ပါသောဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် ခေါင်းလျှော်ရည် များကို သုံးစွဲလျှင် ချက်ချင်း အမွှေးနံ့များကို အလွယ်တကူ ရရှိ နိုင်ပါတယ်။ မိမိနှင့် လိုက်ဖက်တဲ့ မွှေးရနံ့ တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုကိုသာ ရွေးချယ် သုံးစွဲ သင့်ပါတယ်။ လူအများစုက အမွှေးအကြိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ ခံစား သိရှိ လွယ်ကူကြပြီး ပြင်းသော မွှေးရနံ့များက တခြားသူများအား မနှစ်မြို့စေဘဲ စွဲဆောင်မှုလည်း မရှိပါဘူး။
(၃) သန့်ရှင်းသော အဝတ်အစား များကိုသာ ရွေးချယ် ဝတ်ဆင်ပါ။
အကြိမ် အနည်းငယ် ထပ်ခါထပ်ခါ ဝတ်ထားသော အဝတ်အစား များကို သေချာ လျှော်ဖွတ်ပါ။ တစ်နေကုန် ချွေးပြန် ထားပြီး ချွေးနံ့များ ထွက်နေသော အဝတ်အစားတို့ကို တစ်ကြိမ်သာ ဝတ်၍ လျှော်ဖွတ်ပါ။ အခြောက်ခံ စက်ဖြင့် အခြောက်ခံ ထားသော သို့မဟုတ် မီးပူ တိုက်ထားသော အဝတ်အစားများကို ချက်ချင်း ချိတ်ဖြင့် ချိတ်၍ထားပါ။
(၄) တစ်နေ့သုံးကြိမ် သွားတိုက်ပါ။
သွားနဲ့ ခံတွင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ခံတွင်းရနံ့ မွှေးပျံ့စေခြင်းတို့ အတွက် သင်၏သွား များကို တစ်နေ့သုံးကြိမ် တိုက်ပေးပါ။ သွားသန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်သည့် ကြိုးဖြင့် နေ့စဉ် သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပြီး သင့်လျှာကိုလည်း သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပါက အနံ့ဆိုးများနှင့် ဘက်တီးရီးယား ပိုးများ ပေါက်ပွားခြင်းမှ ကာကွယ် ပေးနိုင် ပါသည်။ ခံတွင်းရနံ့ မွှေးပျံ့ စေဖို့အတွက် ငုံဆေး ကိုလည်း ဆောင်ထားပါ။ မကြာသေးမီက ကော်ဖီ သောက်ထားခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် နှစ်မြို့ဖွယ် မကောင်းသော ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ အနံ့ပြင်းသော ဒိန်ခဲ သို့မဟုတ် ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်များ ခတ်ထားသော အစားအစာများ စားသုံးထားပါက လူအများနှင့် စကားမပြောခင် သွားတိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ငုံဆေးပြားကို အသုံးပြုပါ။
နေ့စဉ် လက်သည်း အောက်ဖက်မှ အညစ် အကြေးများကို ဖယ်ရှား၍ လက်ကို သေသေချာချာ ဆေးပါ။ လက်သည်းများကို ညီညီညာညာ ထားရှိပြီး လက်သည်း အပိုင်းအစ များကိုလည်း စနစ်တကျ လွှင့်ပစ်ပါ။
နှာခေါင်းထဲ၊ နားထဲ၊ မျက်ခုံး၊ မေးစေ့နှင့် နှုတ်ခမ်း အပေါ်ဘက် ကဲ့သို့နေ ရာများတွင် မရှိသင့်သည့် အမွှေးအမှင် တို့ကို အမျိုးသားရော အမျိုးသ မီးတွေပါ သတိထားဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ အသက်အရွယ် ရလာသောအခါ နား၊ နှာခေါင်းထဲရှိ မညီညာသော၊ ကောက်ကွေ့သော အမွှေးများနှင့် မျက် ခုံးမွှေး များကို ညှပ်ခြင်း သို့မဟုတ် နုတ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ အမျိုးသမီးများလည်း ဖယောင်းဖြင့် နှုတ်ခမ်း အထက်ပိုင်းရှိ မလိုအပ်သော အမွှေးများကို နုတ်ပယ်ပြီး အကယ်၍အမွှေးအမှင်များသည် ရှည်လာပြီး၊ မြင်မကောင်း၍ အရုပ်ဆိုးပြီးမညီမညာဖြစ်လာပါက နုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ညှပ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ပါ။
သင့်တွင် ဝက်ခြံများရှိလျှင် ဝက်ခြံကို ကြိုတင်ကာကွယ် ကုသပေးနိုင် လောက်သော ဝက်ခြံများ ပျောက်ကင်းသည့် မျက်နှာသစ်ဆေးများ သုံးသင့်ပါသည်။
ရှူးဖိနပ်အတွင်းသို့ ကလေး ပေါင်ဒါမှုန့် ထည့်ခြင်း၊ ဖိနပ်ကို ပေါင်ဒါမှုန့်ဖြင့် တိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိုင်နေစဉ် ကာလများတွင် ဖိနပ်ကို ခေတ္တချွတ်၍ လေဝင်လေထွက် ကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အနံ့ အသက် ဆိုးများကို ကာကွယ် နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အားကစား လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ချိန်တွင် ခြေအိတ်များကို မကြာခဏ လဲလှယ်ပါ။
အဆီစုပ် စက္ကူများ ပါသော အထုပ်တစ်ထုပ်ကို ဝယ်ယူပြီး တစ်နေကုန် ထွက်သော အဆီများကို ၎င်းစက္ကူ များကို အသုံးပြု၍ စုပ်ယူပါ။
အမေရိကန် ဒုက္ခသည် အစီအစဉ် ရပ်ဆိုင်းမှုဂယက် ကျယ်ပြန့်စွာ ရိုက်ခတ်နေ
မယ်လ ဒုက္ခသည် စခန်းအတွင်းက နံနက်ပိုင်း မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် မြန်မာဒုက္ခသည်များ ခေါ်ယူအခြေချမှု အစီအစဉ်ကို အဆုံးသတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောက် ဒုက္ခသည်များအကြား ကျယ်ပြန့်စွာ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှု ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဒေသရှိ စခန်းများမှ ဒုက္ခသည်များအား ခိုလှုံခွင့်ပေးသည့် အမေရိကန်၏ ၉ နှစ်ကြာ အစီအစဉ်ကို ရပ်နားလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ဇန်န၀ါရီလ ၃၀ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်သည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်အရ နောက်ဆုံး လက်ခံခဲ့သည့် အစီအစဉ်မှာ ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီ ၂၄ ရက်တွင် နောက်ဆုံး လက်ခံခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က စပြီး မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကို အမေရိကန် နိုင်ငံက လက်ခံပေးခဲ့ရာတွင် လူဦးရေ ၇၃, ၀၀၀ လက်ခံခဲ့ပြီး မြန်မာဒုက္ခသည် အများဆုံး လက်ခံသည့် နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် အုန်းဖျန်မြို့နယ်ရှိ အုန်းဖျန်ဒုက္ခသည်စခန်းမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုအောင်ခိုင်က ဒုက္ခသည်များ အဓိက အားကိုးရသည့် အမေရိကန်က ဒုက္ခသည်များ အုပ်စုလိုက် အခြေချ နေထိုင်ခွင့် အစီအစဉ် ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့်အတွက် ဒုက္ခသည်များအကြား ရိုက်ခတ်မှုများ ဖြစ်နေကြောင်း ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ဒုက္ခသည်အကုန်လုံးနီးပါးက တတိယနိုင်ငံတွေကို သွားဖို့ အဓိကထားတယ်။ ထားတဲ့အခါမှာ အမေရိကန် က အဓိ က ဖြစ်တယ်။ သူက အများဆုံး ခေါ်တဲ့လူဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ အဲဒီအပေါ်မှာ ဒုက္ခသည်တွေက အများကြီး မျှော်လင့် ထား ခဲ့တာ၊ အခု အမေရိကန်က ရပ်လိုက်တော့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပျောက်ဆုံးသွားတာပေါ့”ဟု အုန်းဖျန် ဒုက္ခသည်စခန်းမှ နိုင်ငံ ရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ကိုအောင်ခိုင်က ပြောဆိုသည်။
တချို့ဒုက္ခသည်များ၏ မိသားစု အရင်း အချာ၊ ဇနီး၊ ခင်ပွန်းသည်များက အမေရိကန်သို့ ရောက်နှင့်ပြီး ဖြစ်နေရာ ထိုကဲ့သို့ အစီ အစဉ် ရပ်ဆဲလိုက်ခြင်းအတွက် မိသားစု ပြန်လည် ပေါင်းစည်းရေး မျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံး ကုန်ကြောင်း၊ ဒုက္ခသည် အများစု သည် မြန်မာပြည်သို့ လုံးဝ မပြန်လိုကြကြောင်း၊ အခြား နိုင်ငံများက ခေါ်ယူသည့် အရေအတွက်သည် အလွန်နည်းပြီး တချို့ နိုင်ငံများကလည်း ခေါ်ယူရေး အစီအစဉ် အလွန်ကြာမြင့်ကြောင်းလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်က လည်း ယခုကဲ့သို့ ဒုက္ခသည်များအား အုပ်စုလိုက် ပြန်လည်အခြေချခွင့်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ခြင်းသည် စောလွန်းသေးကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ဒုက္ခသည်များကိုလည်း အတင်းအကျပ် အိမ်ပြန်ပို့သည့် အနေအထားမဖြစ်ရန် လိုကြောင်း ဧရာဝတီကိုပြောသည်။
“ဒီလို အခြေအနေမှာ အမေရိကန်က Resettlement (ပြန်လည် အခြေချနေထိုင်ခွင့် အစီအစဉ်) ကို မလုပ်တော့ဘူး ဆိုတော့ စောလွန်းနေတယ်လို့ ကျနော်တို့ ထင်တယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းတွေက သူတို့ကိုယ်တိုင်က မြန်မာပြည်တွင်းမှာ လုံခြုံတယ် လို့ စိတ်ထဲမှာ မခံစားရသေးဘူး။ ဆိုတော့ အတင်းအကျပ် အိမ်ပြန်ပို့တဲ့ အစီအစဉ်မျိုး တွန်းပို့ လိုက်တာကတော့ မသင့်တော်ဘူးပေါ့”ဟု သူက ဆိုသည်။
ဒုက္ခသည် စခန်းများအတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ယခင် မြန်မာ စစ်အစိုးရ အကျဉ်းထောင် များတွင် နေလာခဲ့ရသူများဖြစ်ပြီး မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုမျှလည်း မရှိကြသကဲ့သို့ မြန်မာပြည်ပြန်၍ မည်သို့မျှ အခြေချနေထိုင်စရာ လည်း မရှိကြောင်း၊ အကျဉ်းထောင်တွင်း နှစ်ပေါင်းများစွာနေလာခဲ့ရပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ဆင်းဆင်းရဲရဲ ဆက်လက် နေ ထိုင်ရင်း ၄င်းတို့အနေဖြင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန် အလွန်ခက်ခဲကြောင်း ကိုအောင်ခိုင်ကလည်း ပြော ဆိုသည်။
မြန်မာပြည်သို့ ပြန်သွားရန် မဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ၊ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များအတွက် အမေရိကန်၌ အခြေချနေထိုင်ခွင့်ပေးရန် ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်ကြောင်း ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းများရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဟောင်း တချို့ကလည်း ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ နို့ဖိုး ဒုက္ခသည် စခန်း ရမ်မဇံ ရပ်ကွက် ၁၂ တွင် နေထိုင်သူ ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီး တဦးကလည်း “အမေရိကန်ကတော့ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းရေး အစီအစဉ်ကို ရပ်လိုက်ပြီလို့ မနေ့ညက အသံချဲ့စက် နဲ့ စခန်းထဲမှာ လိုက်ကြေ ညာတယ်။ အမေရိကန်က ရပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ကျမတို့ကို ခေါ်တဲ့ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာပဲ ပြောင်းရွှေ့ အခြေချလို့ ရတော့မှာပေါ့၊ မျှော်လင့်ချက်တော့ အတော်အားယုတ်သွားတယ်”ဟု ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းများရှိ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်များမှာ တတိယနိုင်ငံ အခြေချနေထိုင်ရေး မျှော်လင့် ချက် ပျောက်ဆုံးမှု၏ နောက်ကွယ်တွင် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများကြောင့် စာရိတ္တ ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းများလည်း ရှိလာကြောင်း၊ လူငယ်ပိုင်းများသည် မူးယစ်ဆေးဝါးကို အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုများပင် ဖြစ်လာနေပြီး အမျိုးသမီး ငယ်လေးများသည် လည်း ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ဆောင်နေမှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်လာနေကြောင်း ဧရာဝတီက စုံစမ်း သိရှိရသည်။
“အခုလို နိုင်ငံခြားလည်း မထွက်ရဘူး၊ ရိက္ခာကလည်း လျှော့တဲ့အခါကျတော့ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်လာတဲ့အခါ အိမ်ထောင် ရေး ပြဿနာတွေ အများကြီးတက်တယ်။ မိန်းကလေးငယ်တွေဆို ငွေတတ်နိုင်တဲ့ သူတွေ(အမေရိကန်တို့ ဘာတို့က ထောက်ပံ့မှုရှိတဲ့သူတွေ)ရဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ် မယားငယ်တွေဖြစ်နေကြတယ်”ဟု ဒုက္ခသည် စခန်းများ၏ အခြေ အနေကို လေ့လာ မှတ်တမ်းပြုနေသူ တဦးက ပြောသည်။
ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်း စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေမှုများနှင့် တတိယနိုင်ငံ အခြေချနေထိုင်ရေး မျှော်လင့်ချက် ပျောက်ဆုံးနေမှု များ၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲမှုများနှင့် လူမှုရေးပြဿနာများပါ တိုးပွားလာလျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင်၊ အုန်းဖျန်မြို့နယ်ရှိ နို့ဖိုး ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး(UNHCR) ကို ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ဒုက္ခသည် ၁၅၀ ကျော် ဆန္ဒပြမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။
တတိယနိုင်ငံများတွင် ပြန်လည် အခြေချနေထိုင်ရေး အစီအစဉ်များတွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုများ ရှိနေသည့်အတွက် အဆိုပါလုပ်ရပ်များ ရပ်တန့်ပေးရေး အတွက် ဆန္ဒပြကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ယခုကဲ့သို့ အမေရိကန်က ၄င်းတို့ နိုင်ငံတွင် အခြေချနေထိုင်ခွင့် အစီအစဉ် ရပ်ဆိုင်းသည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာမှုပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
နို့ဖိုး ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဆန္ဒပြမှုနှင့်ပတ်သက်၍ UNHCR အနေဖြင့် ဆန္ဒပြသူများ ပြောနေသကဲ့သို့ ခွဲခြား ဆက်ဆံမှု မရှိကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် အခြေစိုက်ရုံးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စ Vivian Tan က UNHCR ကိုယ်စား ပြန်လည် တုံ့ပြန် ပြောဆိုိထားသည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိ ဒုက္ခသည်များ၏ မိသားစုဝင်များ တစည်းတလုံတည်း အတူနေရေး မျှော်လင့်နေကြ သည်ဟု အခိုင်အမာယုံကြည်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း တတိယနိုင်ငံတွင် မိသားစုအရင်းအချာရှိသည့် ဒုက္ခသည်များ အတွက် သာ UNHCR က တတိယနိုင်ငံများတွင် ပြန်လည် အခြေချ နေထိုင်ရေးကို မျက်နှာလိုက် လုပ်ဆောင်နေခြင်း မဟုတ် ကြောင်း မစ္စ Vivian Tan က ဧရာဝတီကို အီးမေးလ် ဖြင့် အကြောင်းပြန်ကြားသည်။
“ဒုက္ခသည် တဦးဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ ထိုင်းနိုင်ငံက စခန်းတွေမှာ ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် စဉ်းစားပေးဖို့ ဆိုတာ ထိုင်း တာဝန်ရှိသူတွေက အဲဒီသူကို မှတ်ပုံတင် စာရင်းသွင်းဖို့ ပထမဆုံး လုပ်ရမှာပါ။ အဲဒီနေ့က အုပ်စု(ဆန္ဒပြသူများ)က ဘယ် တုန်းကမှ ပုံမှန် လုပ်ရတဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားတာမျိုး မရှိဘူး။ ပြီးတော့ အဲဒီ အုပ်စုဟာ တတိယနိုင်ငံ အခြေချရေး အရည်အချင်း လည်း မပြည့်မီပါဘူး”လို့ သူက ဆိုသည်။
နို့ဖိုးစခန်းတွင်းရှိ ဆန္ဒပြ ဒုက္ခသည်များက ၄င်းတို့ထဲကအများစုသည် UNHCR တွင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး Pre ဟု ခေါ်ဆိုသော ဒုက္ခသည်အဖြစ် ပဏာမ သတ်မှတ် စာရင်းဝင်၍ UNHCR နှင့် နယ်စပ် တလျှောက် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ညွန့်ပေါင်း အဖွဲ့(TBC)က ရိက္ခာနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကို ထောက်ပံ့ခံနေရသူများ ဖြစ်ကြောင်း ဒုက္ခသည်တဦး ဖြစ်သည့် ကိုကျော်မြင့်ဆွေ က ဧရာဝတီကိုပြောသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဆန္ဒပြမှုတွင် ပါဝင်သူ ၄င်းအနေနှင့် တတိယနိုင်ငံ အခြေချခွင့် အရည်အချင်းလည်း ပြည့်မီကြောင်း၊ ဇနီးသည် လည်း အမေရိကန်တွင် အခြေချနေထိုင်နေသည့် အတွက် ကိုင်ဆောင်ထားသည့်လက်မှတ်မှာ ထိုင်းအစိုးရနှင့် UNHCR တို့ အသိအမှတ်ပြုထားသည် MPO အဆင့် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ရှင်းပြသည်။
ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်ရှိ အုန်းဖျန်၊ နို့ဖိုး၊ မယ်လ၊ မယ်လဦး၊ ထန်ဟင်း၊ ဘန့်ဒုံယမ်း၊ မယ်ရာမို၊ ကရင်နီ စသည့် ဒုက္ခသည် စခန်း ၉ ခု တွင် လက်ရှိ ဒုက္ခသည် ၁၂၀၀၀၀ ကျော်ရှိနေကြောင်းလည်း ကုလသမဂ္ဂ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။
မန္တလေးတိုင်း၌ ကျောင်းသားများကို အိုင်တီနှင့် အီလက်ထရွန်နစ် သင်တန်းများ အခမဲ့ သင်ကြားပေးမည်
အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအဆင့်မှ တက္ကသိုလ်အဆင့်ရှိ ကျောင်းသားများ အားလုံးကို ခေတ်မီ အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် အိုင်တီ ပညာရပ်များ အကျွမ်းတဝင် အသုံးပြုတတ်စေရန်အတွက် အိုင်တီနှင့် အီလက်ထရွန်နစ် သင်တန်းများ အခမဲ့ လိုက်လံ သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော်ရှိ ဇော် အီလက်ထရောနစ် အထူးသင်တန်းကျောင်း တာဝန်ခံ ဦးဇော်ဇော်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ကျောင်းသားများကို အီလက်ထရွန်နစ်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်၊ မိုဘိုင်းလ်နှင့် Network တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာများ သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးသည့် ကျေးလက်ဒေသများတွင် နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်ဖြင့် တစ်ရွာလုံး မီးလင်းနိုင်သော နည်းပညာဖြင့် တီဗီ၊ ဒီဗီဒီ၊ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်တို့ကို ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်သည့် နည်းပညာများကို အထောက်အကူ ပစ္စည်းများဖြင့် စာတွေ့လက်တွေ့ အခမဲ့ သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသင်ကြားမှု ဆိုင်ရာများကို စစ်ကိုင်း၊ ကျောက်ဆည်၊ မန္တလေးမြို့တော်တို့တွင် လက်ကမ်း စာစောင်များကို အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံဝေငှ အသိပေးမှုများ စတင် ဆောင်ရွက်နေပြီး ကျောက်ဆည်မြို့တွင် ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ အိုင်တီနှင့် အီလက်ထရွန်နစ် နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများ စတင် သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
“တတ်ထားတဲ့ ပညာကို မျှဝေ ပေးတာပါ။ လူငယ်တွေ အိုင်တီ နည်းပညာနဲ့ ရင်းနှီးစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ အခုလို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာရှိတဲ့ မြို့တွေကို အခမဲ့ သင်တန်းတွေ လိုက်ပေးမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မန္တလေးမြို့ပေါ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးများ ဦးဆောင်သည့် အခမဲ့ မူလတန်းမှ အထက်တန်းအဆင့်ထိ ပညာသင်ကျောင်းများနှင့် လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများက ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အခမဲ့ပညာသင် ကျောင်းများသာ ရှိပြီး ကျန်သင်တန်းကျောင်းများမှာ အခပေး မိုဘိုင်းလ် သင်တန်းကျောင်းနှင့် တရုတ်စကားပြော သင်တန်းကျောင်းများကိုသာ မြို့အနှံ့ တွေ့နေရသော်လည်း အခမဲ့ နည်းပညာ သင်တန်းကျောင်းမှာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ဦးစီး ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းကျောင်း တစ်ခုသာရှိကြောင်း မန္တလေးမြို့ဒေသခံ အိုင်တီ ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောကြားသည်။
“အခုလို အိုင်တီ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူငယ်တွေ လိုအပ်နေချိန်မှာ လိုက်လံသင်ပေးမယ့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမဆို စေတနာ မှန်မှန်နဲ့ ပေးမယ်ဆိုရင် မြန်မာမှာ အိုင်တီနည်းပညာ တိုးတက်သွားနိုင်ပါတယ်” ဟု သဒ္ဒါပညာရေးအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူ ဦးဖုန်းမြင့်ဇော်က ဆိုသည်။
မန္တလေးမြို့တော်တွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း သုံးစွဲမှု မြင့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း လူငယ် အများစုသည် အင်တာနက် သင်တန်းများ တက်ရောက်မှု နည်းပါးလာပြီး မန္တလေး အနီးအနား ဝန်းကျင်နှင့် အထက်ပိုင်း မြို့ပေါ်များရှိ လူငယ်အများစုက မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ပြုပြင်နည်း သင်တန်းနှင့် ကွန်ပျူတာ စာစီစာရိုက်များကိုသာ အများဆုံး လာရောက် သင်ကြားမှုသာ ရှိကြောင်း မန္တလေးမြို့တော်ရှိ အင်တာနက် လုပ်ငန်း ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အိုင်တီနှင့် အီလက်ထရွန်နစ် သင်တန်းများ ဆက်သွယ် သင်ကြားလိုသည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရှိ ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် ၀၉-၃၃၃၉၉၂၃၄၊ ၀၉-၆၈၀၂၁၃၄ ထံသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း အဆိုပါ သင်တန်းကျောင်းထံမှ သိရှိရသည်။
မန္တလေးတစ်မြို့လုံးတွင် အင်တာနက် ဆိုင်ပေါင်း၂၁ ဆိုင် ရှိပြီး တရုတ်စကားပြောနှင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ပြုပြင်နည်း သင်တန်းကျောင်း ၂၀၀ ကျော် ရှိကြောင်း မန္တလေး ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များ အသင်းထံမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
သွေးလှူဒါန်းလျှင် နှလုံးရောဂါ လျော့ပါးနိုင်
လေဖြတ်ခြင်းနှင့် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ အလား အလာသည် သွေးမ လှူသည့် လူထက် သွေးလှူဒါန်းသည့် လူများတွင် သုံးပုံ တစ်ပုံခန့် နည်းပါး နိုင်ကြောင်း ကျန်းမာရေး အတိုင်ပင်ခံ ဦးစိုးထွဋ်က ပြောသည်။
သွေးလှူရှင်တွေ အနေနဲ့ သွေးလိုနေတဲ့ လူနာအတွက် သွေးလှူ လိုက်ရလို့ ကျေနပ် ပီတိတွေ ခံစား ရတာအပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး တွေလည်း ရရှိစေပါတယ်ဟု အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
လူ၏ ခန္ဓာကိုယ်မှ ထုတ်လုပ် ပေးနေသည့် သွေးကို ပုံမှန်လှူဒါန်း ပေးခြင်းသည် သွေးထဲမှ ကိုလက်စထရော ပမာဏကို ထိန်းထား နိုင်စေပြီး၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသားများသည် ပုံမှန် သွေးလှူ ဒါန်းခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေး အကျိုး ကျေးဇူးများ စေနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ ရာသီဓမ္မတာကြောင့် လစဉ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ကနေ သွေးတွေ ဆုံးရှုံး ထွက်ရှိလို့ သံဓာတ် ပမာဏ လျော့နည်း ကြပေမယ့်၊ အမျိုးသားများ အနေနဲ့ သွေးလှူဒါန်း မှုကနေပဲ ကိုယ်တွင်းက သံဓာတ် ပမာဏကို လျော့နည်း စေတာပါ။ ထုတ်လှူလိုက်တဲ့ သွေးနဲ့အတူ ပါသွားတဲ့ သံဓာတ်တွေကြောင့် သွေးလှူရှင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သံဓာတ်တွေ လျော့စေတယ်။ သံဓာတ်တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ များလွန်းနေရင် မကောင်းပါဘူး။ သံဓာတ် တွေက ကိုလက်စထရော ဖြစ်စေတဲ့ အရာမှာ တစ်ခုအပါ အဝင်ပေါ့။ ကိုလက်စထရော များရင် နှလုံး ရောဂါနဲ့ လေဖြတ်တာကို ဖြစ်စေတယ်။ဟု ၄င်းမှ ဆိုသည်။
ယင်းကြောင့် ပုံမှန် သွေးလှူဒါန်းသည့် သွေးလှူရှင် များသည် သွေးလှူခြင်းဖြင့် မလိုလား အပ်သည့် သံဓာတ်ပမာဏကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ကိုလက် စထရောကိုလည်း လျော့နည်း စေကြောင်း သိရသည်။
နောက်အယူအဆ အမှားတွေလည်း ရှိတယ်၊ တချို့က ထင်ကြတယ်။ သွေးလှူပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ကိုယ်အလေးချိန် တိုးပြီး ဝလာမယ်၊ သွေးလှူ လိုက်လို့ အားနည်းမယ်ဆို တာတွေပဲ၊ တကယ်တမ်း ကတော့ ထုတ်ယူလိုက်တဲ့ သွေးတစ်အိတ်ကြောင့် သွေးလှူရှင်မှာ ကယ်လိုရီ ၆၅ဝစာ လျော့ကျ စေတာတော့ မှန်တယ်။ ထုတ်လှူလိုက်တဲ့ သွေးတွေကို အစားထိုး ပေးဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်က သွေးအသစ်တွေကို အချိန်ပိုင်း အတွင်း ပြန်လည် ထုတ်လုပ် ပေးပါတယ်။ ဒီတော့ သွေးဆဲလ် အသစ်တွေကို ရရှိစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေး လှူဒါန်း တာဟာ လတ်ဆတ်တဲ့ သွေးအသစ်တွေ ရရှိစေပြီး ကျန်းမာလန်းဆန်း စေပါတယ်ဟု ကျန်းမာရေး အတိုင်ပင်ခံ ဒေါက်တာ ဦးစိုးထွဋ်က ပြောသည်။
မြိတ်မြို့၊ မြိတ်တောင်နယ်မြေ၌ အရက်သေစာ သောက်စားမူးယစ်ပြီး ဈေးဆိုင်အား မီးရှို့မှု ဖြစ်ပွား
မြိတ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၀ ရက်
မြိတ်မြို့ မြိတ်တောင်နယ်မြေ၊ ရေနံမြေရပ်၊ ဘီအိုစီလမ်းတွင် ဇန်န၀ါရီလ(၃၀)ရက် ညနေ(၄း၁၅)နာရီ က အရက်သေစာ သောက်စားမူးယစ်ပြီး ဈေးဆိုင်အား မီးရှို့မှု ဖြစ်ပွါးခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဦးပေါစိန်အနောက်လမ်း၊ မြို့သစ်(၃)ရပ်ကွက်၊ မြိတ်တောင်နယ်မြေနေ မြင့်နိုင်ဝင်း(၂၃)နှစ် (ဘ)ဦးအင်စိန် (ရေလုပ်သား)သည် အရက်သေစာ သောက်စားမူးယစ်ပြီး အမှတ်(၈၂)၊ ဘီအိုစီလမ်း၊ ရေနံမြေရပ်၊ မြိတ်တောင်နယ်မြေရှိ ဦးအောင်စိုး၏ နေအိမ်ရှေ့ရှိ မြေစိုက်တဲဈေးဆိုင် (ဓနိမိုး၊ထရံကာ)၌် ဈေးရောင်းနေသော မ၀င်းနုခိုင်(၂၄)နှစ် (ဘ)ဦးမြဖေ ထံမှ ငွေကျပ်(၁၀၀၀)တောင်းခံရာ မရ၍ မကျေနပ် သဖြင့် ဈေးဆိုင်ရှိဓါတ်ဆီပုလင်းအားခွဲ၍ မီးရှိနေသောဆေးလိပ် တိုဖြင့် မီးရှို့ခဲ့ရာ ဈေးဆိုင်ထရံအား မီးကူး စက်လောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။
အဆိုပါမီးလောင်ကျွမ်းရာသို့ မြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးဇော်ဝင်းဦးစီး၍ သန္ဒေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် (၁၂)ဦး၊ အရန်မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်(၆၀)ဦး၊ ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မီးသတ်ကား(၇)စီးတို့ဖြင့် သွားရောက်၍ မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရာ ညနေ(၄း၁၇)တွင် မီးငြှိမ်းသွားခဲ့သည်။
မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ကာလတန်ဖိုး (၈၇၀၀၀)ခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး မီးရှို့သူ မြင့်နိုင်ဝင်း(၂၃)နှစ်အား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Credit TO : MOI Webportal
အမျိူးသမီးများ တန်းတူ အခွင့်အရေး မရရှိလျှင် နိုင်ငံ ဖွံဖြိုးရေး နှောင့်နှေးနိုင်
အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်း(Women leadership Development Training)ကို ရန်ကုန်မြို့ International ဟိုတယ် ရှိ India စားသောက်ဆိုင်တွင် ဇန်န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။(ဓာတ်ပုံ -နန်းဆိုင်နွမ်/ဧရာဝတီ)
အမျိုးသမီးများသည် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ၌ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ အခွင့် အရေး မရရှိပါက နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးနိုင်ကြောင်း အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ ထက်ဝက်ခန့်သည် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူညီမျှ အခွင့် အရေး ရရှိပါက နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးမှု ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း Gender Equality Network မှ ဒေါ်မေစံပယ်ဖြူက ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
“အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်တိုင် အခွင့်အရေး ရရင်တောင် ယုံကြည်ချက် ရှိရှိနဲ့ နေရာယူဖို့ လိုပါတယ်။ ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ဖို့ အတွက် ကျမတို့ သင်တန်းတွေကို နေရာအနှံ့ ဆက်တိုက် ပေးနေပါတယ်”ဟု ဒေါ်မေစံပယ်ဖြူက ဆိုသည်။
ယင်းအပြင် အမျိုးသမီးများ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ထွက်လာရန် အတွက်လည်း ဆောင်ရွက်နေကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
အမျိုးသမီးများ၏ အတွေ့အကြုံ ခံစားချက်များကို ဥပဒေ ရေးဆွဲချိန်တွင် ထည့်သွင်း ရေးဆွဲမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအမျိုးမျိုးနှင့် နေရာဒေသအနှံ့ရှိ အမျိုးသမီးများနှင့်ပါ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အမျိုးသမီးတွေ အရည်အသွေး မြှင့်တင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ နေရာမှာလည်း များများ ပါဝင်လာဖို့ အတွက် အမျိုးသမီး ခေါင်း ဆောင်မှု သင်တန်းတွေကို လိုက်ပေးနေတာပါ။ ကျမတို့က ၂၀၁၁ ခုနစ် ကတည်းက သင်တန်း စပေးတာပါ”ဟု Women’s Organizations Network of Myanmar မှ ဒေါ်မာမာချိူက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မြန်မာ အမျိုးသမီးများအား အရည်အသွေး မြှင့်တင်ပြီး နိုင်ငံရေး၊ ရပ်ကျေးများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းများ၌ ပါဝင်လာရန် အတွက် အဓိက လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်ကြားပေးသည့် အခါလည်း စီမံခန့်ခွဲတတ်မှု၊ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရေး သဘောတူ စာချုပ်(CEDAW) စသည်တို့ကို သင်ကြားပေးကြောင်း ဒေါ်မာမာချိုက ဆိုသည်။
“သင်တန်းကို နယ်မြေ အသီးသီးလိုက် ပေးနေပါတယ်။ နယ်မှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကလည်း အခုဆိုရင် ပူးပေါင်း ပါဝင်လာကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ထွက်လာဖို့အတွက် ကျမတို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နေပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများသည် တရားဥပဒေ အရ ကိုယ်တိုင် အကာအကွယ် ပြုနိုင်ရန် အတွက် ပညာပေးနေကြောင်း၊ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိရှိလာရန် နယ်ဒေသများသို့ လိုက်လံ ပညာပေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် များစွာလိုအပ်နေသေးကြောင်း New Generation (ရှမ်းပြည်) မှ မသန္တာက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်တန်းတွေ ပေးနေပါတယ်။ လူငယ်ပိုင်းတွေကို အဓိကထားပြီး လုပ်နေပါတယ်။ နယ် တွေက အစ သွားပေးနေပါတယ်”ဟု မသန္တာက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်က ကုလသမဂ္ဂ၏ အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေး သဘောတူစာချုပ် (CEDAW) တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထား သော်လည်း အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်မှုများသည် ထိရောက်မှု မရှိကြောင်း အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများက ဝေဖန် ပြောဆိုလျက် ရှိသည်။
“ဒီကိုယ်တော်နှယ်၊ ကြံကြံဖန်ဖန် ဒီမေးခွန်းကို
ပေါက်ဖွားလာတာ လူမဖြစ်လို့ ဘာဖြစ်ရမလဲ”ဟု
တွေးတောကောင်း တွေးတော နိုင်ပါ၏။
မေးမြန်းရမည့် မေးခွန်း ၁၅ချက်တို့တွင်
“သင် လူသား စင်စစ်ဟုတ်ပါ၏လော” ဟူသော
မေးခွန်းမှာ အဓိပ္ပာယ် ကင်းမဲ့နေသယောင်။
သို့သော်-ထိုမေးခွန်းကို မေးရသည်မှာ အဓိပ္ပာယ်ရှိ၏။
■ ဘုရားရှင်လက်ထက်က နဂါးကြီးတစ်ကောင်
နဂါးဘဝကို ရွံ့မုန်း၍ နဂါး ဘဝမှ လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း
ကြံဆရင်း လူယောင်ဖန်ဆင်းကာ ရဟန်းခံခဲ့ဖူး၏။
ထို့ ကြောင့် ဘုရားရှင်က ရဟန်းခံခါနီးတွင်
ရဟန်းလောင်းအား ထိုမေးခွန်းကို မေးခိုင်းတော်မူခြင်း
“မနုေဿာသိ သင်လူသား စင်စစ်ဟုတ်ပါ၏ လော”ဟူသော
မေးခွန်းသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိ သော မေးခွန်းသာဖြစ်၏။
ဤ၌လည်း “သင် လူဖြစ်ပါပြီလော” ဟူသော
မေးခွန်းကို လေးလေးနက်နက် မတွေးတတ်သူတို့က
အပိုမေးခွန်း(ဌပနီယ ပုစ္ဆာ)ဟုထင်ကောင်း ထင်နိုင်ပေ၏။
♦ လူသား မိဘက ပေါက်ဖွား၍ ပခုံးနှစ်ဖက်ကြား
ခန္ဓာ ကိုယ်ထောင်၍ သွားကာမျှ၊
လက၊်ခြေ ၊ကိုယ် အင်္ဂါ ပြည့်စုံကာမျှဖြင့်
ပြည့်ဝသော မနုဿ ခေါ်-လူသား စင်စစ် မဖြစ်နိုင်ချေ။
♦ လူသားမိဘက ပေါက်ဖွားသည် မှန်သော်လည်း
နေရာတကာဝယ် ငါကို ရှေ့တန်းတင်၍ ပြုလုပ်၊
ပြောဆို၊ကြံစည်နေ လျှင် အနှီပုဂ္ဂိုလ်သည်
မိုးကို ကျောပေး၍ ခြေထောက်လေးချောင်းထောက်ကာ
ကန့်လန့်သွားတတ်သော “ တိရစ္ဆာန်” နှင့်
တိရစ္ဆာန်ဟုခေါ်သော ကန့်လန့်သွား သတ္တဝါတို့သည်
နေရာတကာ ငါကို ရှေ့တန်း တင်တတ်ကြ၏။
ထိုသဘောကို ထင်ရှားစေ ရန် ခွေးတစ်အုပ်ကို
ခေါ်၍ စားခွက်တွင် စား သောက်ဖွယ်များပုံကာ
ကျွေးကြည့်ပါလေ။ တရုန်းရုန်း တဝုန်းဝုန်းဖြင့်
“ငါ ဝဖို့သာ အရေး ကြီးသည်” ဟု
အငမ်းမရ အလုအယက်စား သောက်နေကြသည်မှာ
“ငါ” ကို ရှေ့တန်းတင် သည့်သဘော
ထို့ကြောင့် “ငါ” ကို ရှေ့တန်းတင်ကြသူတို့သည်
လူသားမိဘက ပေါက်ဖွားသည် မှန် သော်လည်း
“တိရစ္ဆာန်” နှင့် မထူးကြချေ။
• အတ္ထာနတ္ထံ မနတိ ဇာနာတီတိ မနုေဿာ။
• ကာရဏာကာရဏံ မနတိ ဇာနာတီတိ မနုေဿာ။
• ကုသလာ ကုသလံ မနတိ ဇာနာတီတိ မနုေဿာ။
• မနော ဥဿန္နံ ဧတေသန္တိ မနုဿာ။
♦ အကျိုးရှိ အကျိုးမဲ့၊ အကြောင်းဟုတ်၊ မဟုတ်၊
♦ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ကို ခွဲခြား၍ သိတတ်ပါမှ
“မနုဿလူ” ဟု ခေါ်ရ၏။
ထိုသို့ မသိလျှင် မနုဿ-လူမဟုတ်ပေ။
♦ ထက်မြက် သော စိတ်ဓာတ်ရှိပါမှ
♦ ထက်မြက်သော စိတ်ဓာတ်မရှိလျှင်
အကျိုးရှိ အကျိုးမဲ့၊အကြောင်းဟုတ် မဟုတ်၊
အဆင့်အတန်းမြင့်သူ မနုဿဖြစ်လေလေ ၊
အများကောင်းကျိုး ဆောင်ရွက်လေ လေဖြစ်သည်။
ဘာသာသာသနာ အကျိုး သယ်ပိုးလေလေဖြစ်သည်။
■ နှစ်တစ်ရာ အတွင်း ပျောက်ကွယ်သွားရ မည့်
တတ်ကျွမ်းသည့် အတတ်ပညာ တို့ကို
ကမ္ဘာလောကပေါ်ဝယ် မိမိ၏ ခြေရာ လက်ရာများ
ကိုယ်ကျိုးနှင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကို မငဲ့၊
အကျိုးရှိ၊ အကျိုးမဲ့ကို ခွဲခြားသိနိုင်သော၊
အကြောင်းဟုတ်-မဟုတ် ခွဲခြား သိနိုင်သော၊
ထို့ကြောင့်လည်း မိမိ အပါအဝင် အားလုံးသော
ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မိမိ ကိုယ် မိမိပြန်လည်
“သင် လူဖြစ်ပါပြီလော” ဟူ၍…။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ဆက်လက်မြင့်တက်နေကြောင်း ၂၀၁၄-၂၀၁၅ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းပါ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ စားသုံးသူဈေးဆနှုန်း (CPI) ကို အခြေခံသော ပျမ်းမျှ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ၂ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၂ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၅ ဒသမ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဖြစ်လာကြောင်း အဆိုပါဥပဒေကြမ်းတွင် ပါရှိသည်။ ယင်းဥပဒေကြမ်းကို လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပေးနိုင်ရန် အစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးဌာနများက တင်ပြထားသောကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ထိန်းချုပ်ရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီနှင့် ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီတို့က အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းထုတ်ပြန် ထားပြီဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်တို့က ပြောဆိုသည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ရန် ဘဏ္ဍာရေးစနစ်၊ အခွန်စနစ်၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း၊ ပြည်ပပို့ကုန်အခွန် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများကို စီးပွားရေးဆန်ဆန် ဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ဥပဒေကြမ်းကို လေ့လာသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောကြားသည်။ စီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းပါ အချက်များအရ ယခုနှစ်တွင် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ပျမ်းမျှစီးပွားရေးအရ ဝင်ငွေကို ကျပ်ဆယ်သိန်းခွဲကျော်အထိ ရရှိလာရန် ရည်မှန်းလုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေကြမ်းအရ သိရသည်။ လာမည့်နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း ရှိလာနိုင်သဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသော အနေအထားတွင် ရှိနေကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ သိရသည်ဟု ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် The Voice Daily သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ "
ပြည်တွင်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အာရှကိုးနိုင်ငံမှာ သယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပြီ
အာရှဒေသတွင်း ကိုးနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းက ပို့စ်ပိတ်စနစ်သုံး မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ကိုင်ဆောင်သူတွေ အင်တာနေရှင်နယ် အောက်ဘောင်းရွှန်းမင်း (International Outbond Roming) စနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီ လို့လည်း သိရပါတယ်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း မိုဘိုင်းလ်အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးခင်မောင်ထွန်းက ‘အာရှ ဒေသတွင်း ကိုးနိုင်ငံမှာ အင်တာနေရှင်နယ် အောက်ဘောင်းရွှန်းမင်းစနစ်ကို စမ်းသပ်ပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်တွင်းက မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေ ပြည်ပမှာ သယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ၊ ဒီကိုးနိုင်ငံအပြင် တခြားနိုင်ငံတွေမှာ သယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာ တယ်လီကွန်အော်ပရေတာတွေနဲ့ ဆွေးနွေးနေပါတယ်’ လို့ ပြောပါတယ်။ ပြည်တွင်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေ ပြည်ပမှာ သယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ဖို့ စက်မှုပိုင်းနဲ့ ခေါ်ဆိုမှုတွေအတွက် တွက်ချက် ကောက်ခံနိုင်ရေး ပထမအဆင့်အဖြစ် ပို့စ်ပိတ် (postpaid) အသုံးပြုသူတွေအတွက် စမ်းသပ် ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မယ့် နိုင်ငံတွေက ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ဗီယက်နမ်၊ တရုတ်ဟောင်ကောင် (အထူးဒေသ)၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံတွေ ဖြစ်တယ်လို့ သိရကြောင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် မော်ဒန် ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ "
ATM စက်များတွင် MPU ကတ်ဖြင့် ဖုန်းငွေဖြည့်နိုင်မည်
အလိုအလျောက် ငွေထုတ်စက် (ATM) များတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ဒုတိယပတ်မှ စတင်ကာ MPU (Myanmar Payment Union) ကတ်ဖြင့် ဖုန်းငွေဖြည့်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အာရှစိမ်းလန်းမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ ဦးရဲမင်းဦးက ပြောကြားသည်။ ATM စက်တွင် ဖုန်းငွေဖြည့်နိုင်ရန် MPU ကတ်ရှိရန် လိုအပ်ပြီး ATM စက်တွင် ကိုင်ဆောင်ထားသော MPU ကတ်သုံးကာ လျှို့ဝှက်နံပါတ် ရိုက်ထည့်ပြီးနောက် ဖြည့်လိုသည့် ငွေပမာဏကို ရွေးချယ်ဖြည့်သွင်းနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ “ဖုန်းငွေဖြည့်နိုင်တဲ့နည်း နှစ်မျိုးရှိတယ်။ တစ်မျိုးက ATM စက်နဲ့ Screen (မျက်နှာပြင်)မှာ ကုတ်နံပါတ်ပေါ်တာကို တစ်ခါတည်း ရိုက်ထည့်တာ။ နောက်တစ်မျိုးက ကုတ်နံပါတ်ကို စာရွက်အနေနဲ့ သိမ်းထားချင်တာမျိုးအတွက် စလစ်ထုတ်ပြီးမှ ဖြည့်လို့ရတယ်” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။ ATM စက်များတွင် MPU ကတ်ဖြင့် ဖုန်းငွေဖြည့်နိုင်ပြီ ဆိုသော်လည်း ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် လက်လီလက်ကား ရောင်းချနေသော အရောင်းဆိုင်များအတွက် ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်း ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် လက်လီလက်ကား အရောင်းဆိုင် လုပ်ငန်းရှင်က ပြောဆိုသည်။ “ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ သေချာမသိပေမယ့် ဒီဟာက MPU ရှိတဲ့သူဖြစ်မှ၊ ပြီးတော့ ATM စက်လည်း အနီးအနားမှာရှိနေမှ အလွယ်တကူ ဖြည့်နိုင်မှာလေ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ MPU ကတ်ဖြင့် ဖုန်းငွေဖြည့်နိုင်သည့် အတွက် ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် အရောင်းဆိုင်သို့ သီးသန့်သွားရန် မလိုအပ်တော့ဘဲ ATM စက်ရှိသည့် နေရာတွင် တစ်ခါတည်း ငွေဖြည့်နိုင်သည့်အတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေလာကြောင်း MPU ကတ် သုံးစွဲသူတစ်ဦးက ဆိုကြောင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် The Voice သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ "
ရခိုင်ပြဿနာ အစိုးရက ဘက်လိုက်နေရင် ယုံကြည်ထိုက်မှု မေးခွန်းထုတ်စရာဟု ဗြိတိန်ပြော
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရာမှာ ဘက်တစ်ဖက်တည်းမှာ ရပ်တည်နေမယ်ဆိုရင် မြန်မာအစိုးရအပေါ် ယုံကြည်ထိုက်မှုဟာ သံသယဖြစ်စရာရှိတယ်လို့ ဗြိတိသျှ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟူဂို ဆွားက ဇန်နဝါရီ ၃ဝရက်နေ့မှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မောင်တောမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငြင်းဆိုခဲ့ပြီးမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်မယ်လို့ မြန်မာအစိုးရက ပြောလာတာကြောင့် ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သေချာတဲ့အကြောင်း၊ ဒါကို ဖော်ထုတ်ရာမှာ ကျယ်ပြန့်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်း ပါဝင်မှုရှိမရှိ စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ ဗြိတိသျှကောင်စီမှာ မိန့်ခွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတမဖြစ်အောင် တားဆီးထားတဲ့ ပုဒ်မ ၅၉(စ)ဟာ ၁၉၄၇နဲ့ ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာလည်း မပါဝင်ဘဲ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိတဲ့ ကန့်သတ်ချက်ဖြစ် တယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပြီး ဒါကို မပြင်ပေးရင် ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတမှုရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယတိပြတ် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်နေမှုဟာ ယုံကြည်ထိုက်မှုမရှိဘဲ သံသယတွေသာ ဖြစ်လာစေမှာလို့ ဒုတိယဝန်ကြီး ဟူဂို ဆွားက ရန်ကုန်မြို့မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံက အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပုံစံသစ်
ကွာလာလမ်ပူမြို့တွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့သစ် စတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စင်သီယာ ဂါဘရီယယ် (အလယ်)နဲ့ အမ်ဘီကာ စရီနေဗာဆန် (ညာဘက်)
မလေးရှားနိုင်ငံဟာ ဒေသတွင်းမှာ အဂတိလိုက်စားမှု အများဆုံးနိုင်ငံ တနိုင်ငံ ဖြစ်တယ်လို့ အာရှပစိဖိတ် အဂတိလိုက်စားမှု နောက်ဆုံးစစ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေက တနိုင်ငံလုံးမှာ ပုံမှန်ကိစ္စရပ်တခုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ စီဖော လို့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့သစ်ကတော့ ဒီ ပျံ့နှံ့လာတဲ့ ရောဂါဆိုးကို တုံ့ပြန်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
ကန်ကွန်းလို့ခေါ်တဲ့ ကန်ဇွန်းရွက်ဟာ မလေးရှားမှာ ဈေးပေါတဲ့ ဟင်းလျာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မလေးရှားမှာ လူတိုင်း ပြောစရာကိစ္စတခု ခဏဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒီလ အစောပိုင်းက ပြောတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် နာဂျစ် အဗ္ဗဒူ ရာဇတ်ရဲ့ မိန့်ခွန်းက စခဲ့တာပါ။
သူ့အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှု ကောင်းမွန်လို့ ကန်ဇွန်းရွက်ဈေးတွေ ကျခဲ့တာကို ဥပမာထုတ် ပြောသွားခဲ့တာပါ။ ကုန်ဈေးနှုန်း တက်ရင်ကျတော့ အစိုးရကို အပြစ်တင်ကြတယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျရင်တော့ ငြိမ်နေကြတယ်ဆိုပြီး အပြစ်ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး ၀န်ကြီးချုပ်ကို လှောင်ထားတဲ့ ကန်ဇွန်းရွက်ဟာသဟာလည်း အင်တာနက်မှာ ပြန့်သွားတော့တာပါပဲ။
အမ်ဘီကာ စရီနေဗာဆန်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ သန့်ရှင်းမျှတရေးတပ်ပေါင်းစု ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို ယူထားတဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်မိန့်ခွန်းကို ဘာကြောင့် မလေးရှားလူထုက ဒေါသထွက်ရသလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပါတယ်။
“မလေးပြည်သူတွေက ဟာသညဏ်လည်း အတော်ရှိတယ်။ ပြဿနာက အုပ်ချုပ်တဲ့ လူတွေက အပြင်က တကယ့်လူထုနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်။ တကယ်တော့ ပြဿနာက ကန်ဇွန်းရွက်ပြဿနာလောက်တင် မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒါထက် အများကြီး ကျယ်ပြန့်တယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်တယ်ပဲ ထားပါအုံး။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က အဂတိလိုက်စားမှုကို ထိထိရောက်ရောက် တားဆီးမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေက လက်ခံအုံးမယ်။ သူတို့တွေသာ တကယ် လုပ်တတ်ကိုင်တတ်ရင် ကုန်ဈေးနှုန်းတက်စရာ အကြောင်းကို မရှိတာ။ အဲ့ဒါကြောင့် လူထုက ဒေါသထွက်တာပေါ့။”
အခုလို ကုန်ဈေးနှုန်းတက်နေတဲ့ကာလမှာ မလေးရှားပြည်သူတွေအနေနဲ့ တတ်နိုင် သလောက် ချွေတာကြဖို့ အစိုးရက တလောက ပြောလိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မလေးရှားဝန်ကြီး တချို့ကျတော့ မွေးနေ့ပါတီကြီးတွေနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီးတွေကို ကွာလာလမ်ပူမြို့က တကယ့်ဇိမ်ခံဟိုတယ်ကြီးတွေမှာ လုပ်နေကြတယ်။
အမ်ဘီကာ စရီနေဗာဆန်က “သူတို့ဆောက်တဲ့ အိမ်ကြီးတွေကို ကြည့်လိုက်၊ သူတို့လုပ်တဲ့ ပျော်ပွဲရွင်ပွဲတွေကို ကြည့်လိုက်။ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေ၊ တကယ်အလွန်အကျွံ၊ သူတို့စီးတဲ့ကားတွေ၊ ကား ဘယ်နှစ်စီးပိုင်တာတွေ၊ လူတွေက ကန်းနေကြတာမှ မဟုတ်တာ။ နိုင်ငံခြားခရီး ထွက်တာတွေကလည်း အမြဲတမ်း။ အဲဒါတွေကို လျော့ရမှာ။ သူတို့ကျတော့ ဆက်ဖြုန်း။ လူထုကျတော့ ချွေတာဆိုတော့။ ဟုတ်မှ မဟုတ်တာ” လို့ ပြောပါတယ်။
တလောက ထွက်လာတဲ့စစ်တမ်းအရဆိုရင် ဒီ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေဟာ မလေးရှား ပြည်သူတွေကြားမှာ ပုံမှန်ကိစ္စလိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ အသက် ၅၈ နှစ်အရွယ် ပင်စင်စား ဗင့်စ်လီးက သူ ဆိုင်ကယ်စီးလာတာကို ရဲက ရုတ်တရက် ဖြတ်တားလိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကားသမားတွေနဲ့ ဆိုင်ကယ်သမားတွေကို မိနိုင်မယ့်နေရာမှာ လာစောင့်နေတယ်။ တကယ်တော့ ကားသမားနဲ့ ဆိုင်ကယ်သမားတွေ မှားနိုင်တဲ့နေရာမှာ လာချောင်းနေတာ။ ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ ပိုက်ဆံ လိုချင်လို့။ ကျနော်က တပြားမှ မပေးနိုင်ဘူးပြောတော့။ တရားရုံး ခေါ်သွားတယ်။ ကျနော်ကလည်း တရားသူကြီးကို ရှင်းပြလိုက်တယ်။ တော်သေးတာပေါ့။ တရားသူကြီးက လက်ခံပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်လို့။”
မလေးရှားအစိုးရမှာကိုက တရားဝင် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စအပေါ်မှာ အစိုးရကိုယ်တိုင်က စိတ်ကို မ၀င်စားဘူးလို့ အမ်ဘီကာ စရီနေဗာဆန် လို အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေက ဆိုပါတယ်။
အမ်ဘီကာ စရီနေဗာဆန်က “အစိုးရကော်မရှင်ကတော့ အလုပ်လုပ်ရင်လည်း လုပ်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တကယ့် အဆုံးအဖြတ်က တရားသူကြီးချုပ်လက်ထဲမှာပါ။ အစိုးရက စွက်ဖက်တာ ဖြစ်မှာပေါ့။ ကိုင်ချင်တဲ့ အမှုမှ ကိုင်တာ။”
အခုတော့ စီဖောလို့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ ခရိုနီတိုက်ဖျက်ရေး စင်တာဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ထွက်ပ်ါလာပါတယ်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်နေကြတဲ့ လူအခွင့်အရေးအခြေခံနဲ့ အန်ဂျီအို အတော်များများလည်း ရှိပါတယ်။ စီဖောကတော့ ဒီ ကျယ်ပြန့်လာနေတဲ့ ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ပထမဆုံး ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ စီဖောအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သူ တဦးဖြစ်တဲ့ စင်သီယာ ဂါဘရီယယ်က တောနေလူတန်းစားကို ဒီ အကျင်ပျက်ခြစားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာပေးရေး အစီအစဉ်ဟာလည်း သူတို့ အဓိကလုပ်ငန်းတွေထဲက တခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
စင်သီယာ ဂါဘရီယယ်က “ကျေးလက်တောရွာတွေမှာဆိုရင် တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက သူတို့တွေကို သူတို့ ပေးချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပဲ ချပေးပြီး သူတို့ပြောသမျှ ယုံအောင် လုပ်ခံထားရတယ်။ ဒီအချိန်ဟာ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချိန် ဖြစ်လာပါပြီ။ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သည်းခံတော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ အစိုးရကို ကျမတို့ ပြောလိုက်ပါပြီ။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတွေကို တိုက်ဖျက်မယ်။ ကျမတို့ ပေးထားရတဲ့အခွန်တွေကို မှန်မှန် မစီမံတာတွေနဲ့ အလွဲသုံးစားတာတွေ ဖြေရှင်းရမယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
စင်သီယာကတော့ စီဖောအနေနဲ့ အစိုးရကို ပိုပြီးတာဝန်ခံဖို့ မြင်သာထင်သာရှိဖို့ တွန်းအားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
“အကျင့်ပျက် ခြစားတဲ့သူတွေပဲ စီဖောလို အဖွဲ့မျိုးကို ကြောက်မှာလေ။ စီဖောကို ကြိုဆိုတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိမှာ ဖြစ်သလို မကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်း အများကြီးရှိမှာပဲ။ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ဖော်မှာ ကြောက်တယ်လေ။ ဒါဆိုသိပြီလေ။ ဘယ်သူက ဘယ်သူဆိုတာ။”
အကျင့်ပျက်ခြစားတာကို တဦးချင်းအဆင့်က စတင်ရင် အကောင်းဆုံးလို့ အငြိမ်းစား ဗင့်စ်လီးက ဆိုပါတယ်။ ဒီ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကို သူ့မိသားစုထဲကတောင် စပြီး ဆွေးနွေးနေပါပြီလို့ ပြောပါတယ်။
“တခုခုကို ရဖို့ လာဘ်ပေးစရာလည်း မလိုဘူး။ လာဘ်ယူစရာလည်း မလိုပါဘူး။ ဥပမာ အလုပ်ထဲမှာ အထက်လူကြီးက မြန်မြန် ရာထူးတက်ဖို့ တခုခုလုပ်ရမယ်ဆိုပါတော့။ မလုပ်သင့်ဘူး ထင်ရင် မလုပ်ရဘူး။
အာရှဒေသအစီအစဉ်အတွက် စီတရ ပရာစ်တူတီက မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ကနေ သတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။
ဘန်ကောက်ဆန္ဒပြပွဲ အရှိန်မြှင့်တင်ရန် ပြင်ဆင်
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ အစိုးရက ကြေညာထားတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့မှာ ဆန္ဒပြပွဲအရှိန်ကို မြှင့်တင်ဖို့ ထိုင်းဆန္ဒပြသူတွေ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။
ထိုင်းဆန္ဒပြသူတွေက ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ မဲပေးမှုကို နှောင့်ယှက်မယ်လို့ ပြောဆိုနေ ကြတာကြောင့် ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ဆူသက် သောင်းဆုဘန်က ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေ ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ယခင် ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ဆန္ဒမဲပေးတာကို အဟန့်အတားပေး၊ နှောင့်ယှက်ဖို့ မပြောတော့ဘဲ လူတွေ အချိန်အကုန်ခံပြီး မဲသွားပေးမနေနဲ့လို့ လျော့ချပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မဲပေးမှုကို အဟန့်အတားလုပ်ရင် အစိုးရအတွက် အပြစ်ရှာစရာဖြစ်မှာ ဖြစ်ပြီး အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းကသာ အကောင်းဆုံးလို့ ဆန္ဒပြသူတွေက ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ပြောကြားချက်ကို ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းစစ်တပ်ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့မှာ အကြမ်းဖက်မှု တွေ မဖြစ်အောင် ဘန်ကောက်မြို့တော် လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်ထားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အစိုးရကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ကို ဆက်လက် တွန်းအားပေးနေပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့ရက်မှာ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေ ဖြစ်ပွားလာမှာကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ လုပ်နေတဲ့ အစိုးရကို ဆက်လက်ဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့ ဘန်ကောက်မြို့က အဓိကလမ်းဆုံနဲ့ လမ်းမတွေကို အစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေက ပိတ်ဆို့ခဲ့ကြပြီး ၀န်ကြီးဌာနရုံးတွေကိုလည်း မဖွင့်အောင် ဖိအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်ကတည်းက စတင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ လူ ၁၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၅၇၇ ယောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ ဘန်ကောက်မြို့မှာ မှတ်တမ်းကောက်ယူနေတဲ့ အီရာဝန်ကျန်းမာရေးဌာနက ဆိုပါတယ်။
၅ နှစ်အတွင်း လူဦးရေ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း ဖုန်းကိုင်နိုင်မည်
ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ရက်နေ့က နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနကနေ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ လိုင်စင်ရရှိခဲ့တဲ့ အော်ရီဒူးနဲ့ တယ်လီနော် ကုမ္ပဏီ ၂ ခုဟာ လာမယ့် ၅ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း တယ်လီဖုန်း အသုံးပြုနိုင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်သွားမယ်လို့ နေပြည်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားမှာ ပြောဆိုပါတယ်။
စာချုပ်အရ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့မှာ လုပ်ငန်းတွေ စတင်ပြီး ၈ လနဲ့ ၉ လအတွင်း 3G စနစ် မိုဘိုင်းဖုန်းဆင်းကဒ်တွေကို ကျပ်ငွေ ၁၅၀၀ လောက်နဲ့ ရောင်းချပေးသွားမယ်၊ နောက်ပိုင်း 4G အဆင့်မြှင့်တင်သွားမယ်လို့ ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောဆိုပါတယ်။
ကာတာအခြေစိုက် အော်ရီဒူးနဲ့ နော်ဝေအခြေစိုက် တယ်လီနော် ကုမ္ပဏီတို့ဟာ အစိုးရဆီကနေ ၁၅ နှစ်တာ ကာလ သက်တမ်းရှိတဲ့ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ကို ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ရက်နေ့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင်အရေး အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှု ၁၄ လပြည့်အဖြစ် ဒေသခံများ ၀မ်ပေါင်ရုံးအနီးအထိ ဆန္ဒပြ
လက်ပံတောင်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှု ၁၄ လပြည့်အဖြစ် ဒေသခံများ ဆန္ဒပြနေစဉ်
ယင်းမာပင်ခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှု ၁၄ လပြည့် အဖြစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက် နေ့လယ် ၁ နာရီမှ စတင်ကာ ညနေ ၄ နာရီအထိ လက်ပံတောင်းတောင် ဒေသခံအင်အား နှစ်ရာဝန်းကျင်တို့သည် တုံကျေးရွာမှတဆင့် မြန်မာဝမ်ပေါင်ရုံးအနီးထိ တရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် တောင်းဆိုချက် ၇ ချက်ကို ကြွေးကြာ်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“လက်ပံတောင်းတောင်အရေးက အခုချိန်အထိ အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်က အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှု ၁၄ လပြည့်အဖြစ် ဆန္ဒပြဖို့ သက်ဆိုင်ရာကို နှစ်နေရာ ခွင့်ပြုမိန့်တင်ထားတယ်။ လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသရယ် မုံရွာမြို့ရယ် ခွဲပြီးတင်တယ်။ လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသကိုပဲ ခွင့်ပြုမိန့်ပေးပြီး မုံရွာ အတွက်အပယ်ခံရတယ်။ မီးလောင်စေတဲ့အရာတွေနဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ သပိတ်စခန်းတွေကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့ တရားခံတွေကို ဖော်ထုတ်မပေးမချင်း တရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့်နဲ့
ဆန္ဒထုတ်ဖော် တောင်းဆိုသွားမယ်။ စောစောရက်တုန်းက ဆန္ဒပြဖို့နေရာကို ၀မ်ပေါင်ရုံးအထိ တင်ထားပေမယ့် ၀မ်ပေါင်ရုံးမရောက်မီ ညောင်ပင်ကြီး-ယင်းမာပင်ကားလမ်းပေါ်က ရန်မျိုးအောင်စေတီအထိပဲ ခွင့်ပြုမိန့်ပေးထားပါတယ်။ ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကတော့ အားအင်တွေရှိနေသရွေ့ တရားခံတွေကို မဖော်ထုတ်မပေးမချင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ကို တောင်းဆိုသွားမှာပါ”ဟု တုံကျေးရွာမှ ဒေသခံတောင်သူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
လက်ပံတောင်းတောင်အရေး အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှု ၁၄ လပြည့်အဖြစ်ဆန္ဒပြသော ဒေသခံများတောင်းဆိုသည့်အချက်များမှာ -
၁။ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းလုံးဝဖျတ်သိမ်းပေးရေး ၂။ ပုဒ် ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားမှုကို ရုပ်သိမ်းပေးရေး ၃။ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့သည့် မီးလောင်ဗုံး တရားခံများကို ဖော်ထုတ်အရေးယူပေးရေး ၄။ လယ်တီသိမ်ကျောင်းကို ဖျက်ဆီးရန် လုပ်ဆောင်နေသည့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ဦးပိုင်နှင့်ဝမ်ပေါင်ကို အလိုမရှိ ၅။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာအတိုင်း မလုပ်ဆောင်သည့် ဦးပိုင်နှင့်ဝမ်ပေါင် အရေးယူပေးရေး ၆။ မြေယာလျော်ကြေးမယူသည့် လယ်ယာမြေများပေါ်တွင် သွပ်ဆူးကြိုးခတ်မှုအား ချက်ချင်းဖြုတ်ရေ။
တရားမ၀င်မိုင်းခွဲနေမှုများ ချက်ချင်းရပ် စသည်များကို ကြွေးကြော်ကာ တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ညနေ ၅ နာရီ ၀န်းကျင်တွင် လက်ပံတောင်းဒေသရှိ တုံကျေးရွာတွင် ဒေသခံများနှင့် သံဃာတော်များ ဦးဆောင်ကာ လယ်တီသိမ် နှင့် စေတီအပြောင်းအရွှေ့အကြောင်း စည်းဝေးပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပဋိပက္ခအပေါ် မှားယွင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ဗြိတိသျှသံရုံး ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း
မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ရက်နေ့တွင် မှားယွင်းသတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်း ထုတ်ပြန်ချက်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းကြောင်း ဗြိတိသျှ သံရုံးမှ ယနေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် သည်။ ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယရုံး အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း အဖြစ်အပျက်များ အပေါ် များစွာ စိုးရိမ်မိပါကြောင်း၊ ယင်းကြောင့် မြန်မာ အစိုးရအား လွတ်လပ်ပြီး ထင်သာမြင်သာ ရှိသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ အလျင်အမြန် ပြုလုပ်ရန် မေတ္တာရပ်ခံကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုချီးယားတန်းရွာတွင် ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်များ သတ်ဖြတ်ခံသည့် အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဗြိတိသျှသံရုံးနှင့် အမေရိကန် သံရုံးတို့က ပူးတွဲ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ မြန်မာ နေရှင်နယ်လိဂ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ ပြန်စမည်
၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနေရှင်နယ် လိဂ် (MNL) အမှတ်ပေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပွဲစဉ် ၁ ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲများကို YUSC ကွင်း၊ KBZ ကွင်း၊ မုံရွာကွင်း၊ ဗထူးကွင်း၊ အောင်ဆန်းကွင်းနှင့် သုဝဏ္ဏကွင်းများတွင် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်၊ မနောမြေ၊ ကမ္ဘောဇ၊ နေပြည်တော်၊ ဇေယျာရွေမြေ၊ ဆောက်သမ်း၊ ရတနာပုံ၊ ချင်းယူနိုက်တက်၊ ချင်းပြည်နယ်မှ တန်းတက်လာသည့် GFA ၊ ဇွဲကပင်၊ မကွေး၊ ဧရာဝတီ စသည့် ၁၂ အသင်းများပါဝင်ကြောင်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဘောလုံးရာသီ အပြီး ၅ လကြာရပ်နားထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
ဆရာတော်များ၏ မှတ်သားဖွယ်ရာ အဆုံးအမများ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လေကြောင်းလိုင်းများ လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိခြင်း၊ မတော်တဆ ဖြစ်မှုများ များပြားလာခြင်းတို့ကြောင့် လေယာဉ် နတ်ပြရသည့် ထုံးစံတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာကြောင်း သိရသည်။
Planet Evening News Sheet (30-Jan-2014)
အစိုးရ ကတိမတည်ကြောင်း လွှတ်တော်အမတ်များ ဝေဖန်
အစိုးရအဖွဲ့ဟာ စီမံကိန်းမှာ ပြောဆိုထားတာတွေကို ကတိမတည်ဘူးလို့ ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ အမတ်တွေက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့က တင်ပြလာတဲ့ ၂၀၁၄ – ၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းရဲ့ မူနဲ့ အခြေခံသဘော ဆွေးနွေးရာမှာ သူတို့က ခုလို ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အမတ် ဦးသူရိန်ဇော်က အရင် ၂၀၁၁ – ၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စီမံကိန်းမှာ ကရင်ပြည်နယ်ကို ဓာတ်အားလိုင်းတွေ သွယ်တန်းပေးမယ်လို့ ဆိုပေမယ့် အခုထိ အဲဒါမျိုး ဆောင်ရွက် မပေးသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် အမတ် ဒေါ်ခင်စောဝေကလည်း ၂၀၁၂ – ၁၃ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တုန်းက သူမဲဆန္ဒနယ်မြေထဲမှာ ကျောင်း ၄၀ ကျော် ပြင်ပေးမယ် ကတိခံ ထားပေမယ့် အခု ၁၄ ကျောင်းတောင် ပြင်မပြီးသေးဘူးလို့ ထောက်ပြပါတယ်။
အလားတူ မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်က အမတ် ဒေါ်မိမြင့်သန်းကလည်း ပညာရေးမှာ မူလတန်းကို အခမဲ့ဆိုပြီး ထည့်ထားပေမယ့် တကယ်လက်တွေ့ ဖြစ်မလာဘူးလို့ ထောက်ပြခဲ့ ပါတယ်။
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများ ဘတ်ဂျက်မျှ သုံးပေးရန် ဝန်ကြီးဌာနများကို တောင်းဆို
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍများတွင် ဘဏ္ဍာငွေ တိုးမြှင့်သုံးစွဲမှု မရှိသောကြောင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ ရရှိထားသော ဘဏ္ဍာငွေများကို မျှဝေ သုံးစွဲပေးရန် ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်း ကော်မတီက တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ သိရသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသား စီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်း ကော်မတီ၏ လေ့လာ တွေ့ရှိချက်များကို တင်ပြရာတွင် ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်း ကော်မတီက ယင်းသို့ တောင်းဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းပါ ဘဏ္ဍာငွေ သတ်မှတ်ချက်များတွင် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် မြှင့်တင်ရန် အဓိက ကဏ္ဍများဖြစ်သော ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ထပ်မံတိုးမြှင့်မှု မရှိဘဲ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် အတိုင်းသာ ရှိနေသောကြောင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများ အနေနှင့် မျှဝေသုံးစွဲ သင့်ကြောင်း ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်း ကော်မတီဝင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၀) အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်ထွန်းက ဆိုသည်။
“နိုင်ငံတော်အတွက် အဓိကကျတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာ တိုးမြှင့်မှုမရှိဘဲ ဒီအတိုင်းသာ ရှိနေတာဟာ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝန်ကြီးဌာန ၁၀ ခုလောက်က မျှသုံးလိုက်ရင် အဆင်ပြေမှာပါ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ကျောင်းသားနှင့် ဆရာအချိုးမှာ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသဖြင့် အချိုးသိသာစွာ မြင့်လာစေရန် စီမံကိန်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပညာရေး အသုံးစရိတ် လျာထားရာတွင် လိုအပ်ချက် ပြည့်မီသော အစီအစဉ်များကို တိုးမြှင့် သုံးစွဲသင့်ကြောင်း ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်း ကော်မတီ အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည်။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ကျောင်းသားဦးရေ တစ်ထောင်လျှင် မူလတန်းအဆင့်တွင် ဆရာဆရာမ ၃၀ ဦး၊ အလယ်တန်း အဆင့်တွင် ဆရာဆရာမ ၃၄ ဦးနှင့် အထက်အတန်း အဆင့်တွင် ဆရာ ဆရာမ ၂၅ ဦးကိုသာ အသုံးပြုထားကြောင်း ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ထို့ပြင် ဝန်ကြီးဌာန ၃၄ ခုမှ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းတာ စီမံကိန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် ငွေကျပ် ၆၈၅၅ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ အသုံးပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ပြည်သူများကို သူတောင်းစားလိုဖြစ်အောင် အစိုးရလုပ်နေဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဝေဖန်
ရန်ကုန် ၊ ဇန်နဝါရီ ၃၀ ။ ။ နိုင်ငံ တော်အစိုးရသည် ပြည်သူများ အတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်များအား ပြည်သူများကတောင်း မှ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းသည် ပြည်သူများအား သူတောင်းစား လို ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃)မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးပေါလ်ထန်ထိုင်းက ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်တွင် ပြောကြား ခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီ၃ဝရက်တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နဝမပုံမုန်အစည်း အဝေးသတ္တမနေ့တွင် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍဍာနှစ်၊ အမျိုးသား စီမံကိန်းဥပဒေကြမ်း၏မူနှင့် အခြေခံသဘောနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၏ ယင်းဥပ ဒေ ကြမ်း ပါမူနှင့် အ ခြေခံသဘောတရားများအရ လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ဆွေး နွေးရာတွင် လွှတ်တော်အတွင်း ယင်းကပြောကြားခဲ့သည်။
““ကျွန်တော်တို့ဟာ ယနေ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ် ကို မရောက်သေးဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားပြည် သူများအတွက် လုပ်သင့်လုပ် ထိုက်သည်ကို မတောင်းဘဲ မ ဆိုဘဲလုပ်ပေးရမယ့် တာဝန် ရှိ ပါတယ်။ ပြည်သူများကတောင်း မှ လုပ်ပေးမည်။ ဆောင်ရွက် ပေးမည်၊ တောင်းမှပေးမည်ဆို ပါက ပြည်သူများကို သူတောင်း စားလို မပြုသင့်ပါဘူး””ဟု လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးပေါလ် ထန်ထိုင်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော် တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍နိုင်ငံ သမ္မတရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး က ““လွှတ်တော်မှာ ဒီလိုပြော ကြားချက်ဟာ ပရမ်းပတာနိုင် ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဓနအင်အား တွေကို ခြုံကြည့်ရင်လိုအပ်တာ များတယ်။ အရင် အစိုးရလုပ် ခဲ့တာတွေနဲ့ ရောထွေးပြီးမပြော သင့်ဘူး။ လက်ရှိမှာနိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးက အောက်ခြေက တင်ပြတဲ့ ပြည်သူဗဟိုပြုဘတ် ဂျက်စနစ်နဲ့ ပြည်သူဗဟိုပြုစီမံ ကိန်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတာ ပါ။ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အောက်ခြေအထိ အထောက် အကူပြု ကော်မတီတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာအများစုက ပြည်သူတွေ များပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားနဲ့ တိုင်းဒေသနဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တွေပါပါတယ်။ သူတို့ တွေက ကိုယ့်ရပ် ကိုယ့်ရွာမှာ ဘာတွေလိုတယ်၊ ဘယ်လိုစီ မံကိန်းတွေဆောင်ရွက်သင့် တယ်ဆိုတဲ့ အောက်ခြေက တက် လာတဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်။ အဲဒီမှာဘယ်ဟာ အရေးကြီး တယ်ဆိုတာကို ဝိုင်းဝန်းဆုံး ဖြတ်ပြီး ပြည်သူတွေအများစု ပါဝင်တဲ့ သက်ဆိုင် ရာတိုင်း ဒေသနဲ့ ပြည်နယ်အထောက်အကူ ပြုအဖွဲ့တွေကဆုံးဖြတ်ပြီး အ ရေးကြီးတာကို ဆောင်ရွက်ပေး ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဆုံး ဖြတ်တဲ့နေရာမှာလဲ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရပါ တယ်။ တောင်းစ ရာ မလိုပါ ဘူး။ ပြည်သူပြောတဲ့ဟာတွေကို လုပ် ပေးတာ။ အရင်က ဗဟိုဦးစီးစ နစ်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်။ အခုပြည်သူ ဗဟိုပြုသွားတယ်။ အခုပြော ကြားတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်အနေနဲ့ သူ့မြို့နယ်က ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက် အ ကူပြု ကော်မတီ ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ က ရပ်မိရပ်ဖတွေနဲ့ ထိတွေ့မှု နည်းပါးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်”” ဟုပြောသည်။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍဍာ နှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေ ကြမ်း၏မူနှင့် အခြေခံသဘော နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်များမှ ဆွေးနွေးရာ တွင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃ဝမှဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အများစု မှာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍဍာနှစ်၊ အမျိုး သား စီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်း တွင် ယခင်နှစ်များက လွှတ် တော်ကိုယ်စာလှယ်များအား လွှတ်တော်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးများမှ ကတိပြုလုပ်ဆောင် ပေးမည်ဟု လွှတ်တော်တွင် ကတိပြုခဲ့သော် လည်း ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ဘဏ္ဍဍာနှစ်၊ အမျိုးသား စီမံကိန်းဥပဒေကြမ်း မူကြမ်း တွင်ပါရှိလာခြင်းမရှိသည့်အ ပေါ် ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၆)လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးဆွန်ထုတ်ကျင့်က ““ကျွန် တော်တို့လွှတ်တော်ရဲ့ ဆောင် ရွက်ချက်၊ အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက် ချက် မူဝါဒတရားများအပေါ်မှ ပြည်သူများကအားကိုးတကြီး ယုံကြည်လေး စားကြ ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီလို ကတိပြုထားတဲ့ အတိုင်း မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အ ချိန်မှာ ပြည်သူလူထုက လွှတ် တော်နဲ့အစိုးရအပ်ါမှာ အယုံ အကြည်နည်းလာပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်မို့လို့ ကတိပြုပြီးသား ကိစ္စများအပေါ်မှာ မင်းမှာသစ္စာ၊ လူမှာကတိ ဆိုတဲ့ အတိုင်း အစိုးရ အနေနဲ့ အကောင်အထည် ဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်လို့ နာယကကြီးမှ တစ်ဆင့်လေး လေးနက်နက်တင်ပြအပ်ပါ တယ်””ဟုပြောသည်။
ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်း ကော်မတီဝင်တစ်ဦး ကရှင်းလင်း ရာတွင် ““နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ဖို့ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာစီမံ ကိန်းတွေကနေ အကျိုးအမြတ် ရရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့ တွက်ခြေ ကိုက်ဖို့နဲ့ လူမှုရေးအကျိုးရှိဖို့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ တွေ က အမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်း စားနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီမံ ကိန်းဥပဒေဆိုတာက နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းတွေကို ဖော်ပြပြီးတော့ ပြည့်မီအောင် ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဆိုတာကို ဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌဌာန်းထား တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လို့ အကောင် အထည် ဖော်မယ့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း အခြေအနေ ကို နောက်ဆက်တွဲတွေမှာအ ကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ် ပါတယ်။ အခုဥပဒေကြမ်းမှာ ကစီမံကိန်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုတွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေပဲပါ လာ တာတွေ့ရပါတယ်။ ဘဏ္ဍဍာ ရေးနှစ် အစမှာ ဘာတွေဖြစ်နေ လဲနှစ်အဆုံးမှာ ဘယ်လိုအခြေ အနေတွေရှိမယ်ဆိုတဲ့ စီမံကိန်း အခြေအနေတွေ ထည့်သွင်းပြီး တော့မှ ကော်မတီလူကြီးတွေ က သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်မို့ ဌာနအလိုက်ဆောင် ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းနဲ့ စီမံကိန်း အသစ်တွေ တစ်ခုချင်းအလိုက် ဖော်ပြရမယ်လို့ယူဆပါတယ်””ဟု သဘောထားမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ရှာကီရာက သူမနှင့် ရီဟန်နာတို့၏ ပူးပေါင်းဖန်တီးမှု သီချင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အမြင်သုံးသပ်ချက်များကို ဖွင့်ဟ ပြောကြားခဲ့သည်။ အသက်(၃၆)နှစ်ရှိ ကိုလံဘီယာ Popဂီတ အဆိုတော်သည် ရီဟန်နာနှင့် တွဲဖက်သီဆိုထားသည့် Can't Remember To Forget You သီချင်း၏ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ် မြင်ကွင်းများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ဗီဒီယို ဖြတ်ပိုင်းလေး တစ်ခုကိုလည်း ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့သည်။ (၅၅)စက္ကန့်စာ ကြာမြင့်သော အဆိုပါ ဗီဒီယိုတွင် ရီဟန်နာနှင့် ရှာကီရာတို့၏ ဆွဲဆောင်မှု ပြည့်ဝသော သရုပ်သကန်ကို ပရိသတ်များ ပိုမိုထိတွေ့ ခံစားခွင့် ရနေစေခဲ့သည်။ ရှာကီရာက ယင်းသီချင်းအတွက် ရီဟန်နာကို ရွေးချယ်ခဲ့သည့် အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြခဲ့သည်။
"Can't Remember To Forget You" ဟာ Reggaeနဲ့ Rock ဝိညာဉ်ကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဖန်တီးမှုမျိုးပါ။ ဒါကြောင့်လည်း Featuring အပိုင်းမှာ ရီဟန်နာကသာ လုံးဝဥဿုံ ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူလို့ ကျွန်မယူဆခဲ့တယ်။ တကယ်ဆို ကျွန်မဟာ ဒီသီချင်းရဲ့ တစ်ဝက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့တစ်ဝက်က ရီဟန်နာပါပဲ"ဟု ရှာကီရာက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ရှာကီရာက ထုတ်ပြလိုက်သည့် ဗီဒီယိုသည် လော့စ်အန်ဂျလိစ်၏ မြင်ကွင်းကျယ် ပုံရိပ်များကို အခြေခံထားသလို ရီဟန်နာ၏ ပြင်ဆင်မှုများကိုလည်း အနီးကပ်
မ ကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြိုင်မြို့နယ်ညောင် ရွာအုပ်စုညောင် ရွာကျေးရွာ၏မှီခိုအားထားရာသောက်သုံးရေကန်ကြီးဖြစ်ပါသည်။အိမ်ခြေ(၅၃၀)လူဦးရေ(၂၉၃၄)ဦးရှိလေ တော့နွေဦးရောက်ပီဆိုရင် ကန်တော်ကြီးအတွင်းက ရေနဲ့စိမ့်ရေတွင်းများမှရေတို့ဟာကျေးရွာနေပြည်သူတို့၏ရေသုံးစွဲမှုပမာဏကိုလုံလောက်စွာပေးနိုင်ခြင်းမရှိလေရော့နွေရာသီရောက်လာမည်ကိုကြောက်နေကြရပါသည်။နွေရာသီရောက်လာပီဆိုရင်ရေဒုက္ခကိုနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ကြရပါသည်။
အဲဒီအ ခြေ နေကိုအန်တုရန်အတွက်စက်ရေတွင်းအသစ်တူးဖေါ်ရန်ဦးတည်ဆောင် ရွက်နေပါသည်။တောလက်ကျေးရွာအ နေထားကြောင့် ကျေးရွာအတွင်းမှအလှူငွေ ကျပ်သိန်းတစ် ရာနှစ်ဆယ်နီးပါးရရှိသော်လည်းကုန်ကျမှုကကျပ်သိန်းသုံးရာနီးပါးရှိမည်ဟုခန့်မှန်းထားပါသဖြင့်စေတနာရှင် အလှူရှင် များရှာဖွေနေပါသည်။
စေတနာရှင် အလှူရှင် များရှာဖွေပြီးကူညီလှူဒါန်းပေးနိုင် ပါရန်တင်ပြလိုက်ပါသည်။
နှစ်သစ်မှာ ကလေးများများယူကြပါ - စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ်
နှစ်သစ်မှာ ကလေးများများယူကြဖို့ စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ်က သူ့နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါပြီ။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကာလအတွက်ထုတ်လိုက်တဲ့ သဝဏ်လွှာမှာ ဝန်ကြီးချုပ်က ... အနာဂတ်ကိုထူထောင်ဖို့ ကလေးတွေ အလုံအလောက် လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘော ပြောသွားပါတယ်။
လက်ထပ်ကြဖို့၊ မိခင်ဖခင်ဘ၀ခံယူကြဖို့ အစိုးရက လှုံ့ဆော်သော်ငြားလည်း ကလေးမွေးနှုန်းကျင်ဆင်းနေတုန်းပါပဲလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ရှေ့လ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ချစ်သူများနေ့မှာ မင်္ဂလာဆောင်ကြဖို့ မှတ်ပုံတင်ထားသူ စုံတွဲပေါင်း ၃ဝဝ နီးပါးရှိကြောင်းလည်း သူက ထည့်ပြောသွားပါတယ်။
မိသားစုဘ၀ တည်ဆောက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ရေး၊ မူကြိုကျောင်း ဆိုတာတွေ ရှိလာပါပြီ။ ဒီအကြောင်းကိုလည်း ဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်းရဲ့ သ၀ဏ်လွှာမှာ တွေ့ရမှာပါ။
မူကြိုကျောင်းတွေ မြန်မြန်နဲ့များများ ထပ်ပေါ်လာအောင် ကြိုးပမ်းနေတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က မူကြိုကျောင်း အသစ် ၇,ဝဝဝ ပေါ်လာအောင် စီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်၊ ၂၀၁၇ ဆိုရင် မူကြိုကျောင်း နှစ်သောင်း ရှိလာဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ ဆိုတယ်။
မိသားစုဘ၀တည်ထောင်ရေးကို အားပေးထောက်ခံလာကြအောင်လည်း စီစဉ်ရမယ်လို့ ဆိုတယ်။
လီရှန်လွန်းအကြောင်း အွန်လိုင်းမှာ နည်းနည်းချောင်းကြည့်လိုက်တော့ သူက သားသမီး ၄ ဦး ရှိတဲ့ ဖခင်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် သားသမီး မနည်းဘူး ဆိုတော့ တခြားသူတွေကိုလည်း ကလေးများများမွေးကြဖို့ တိုက်တွန်းတာ မှားတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါ။
တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ ပဝေသဏီကတည်းက ကမ္ဘာအနှံ့ရောက်ရှိနေပြီး စင်္ကာပူမှာလည်း တရုတ်အများအပြား နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။
လူများစု တရုတ်ဖြစ်နေတတဲ့ စင်္ကာပူမှာ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး အငွေ့အသက်ကို တခြားသော အာရှနိုင်ငံများထက် ပိုမို မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိပါတယ်။ အခုတောင် ဝန်ကြီးချုပ်က တရုတ်နှစ်ကူး၊ မြွေနှစ်ကနေ မြင်းနှစ်ကို ကူးတဲ့ သမယမှာ စာတစောင် ထုတ်လိုက်ပြီ မဟုတ်လား။
သ၀ဏ်လွှာကို စာဖတ်သူ အများအပြားက မှတ်ချက်ပေးနေရာမှာ တယောက်ကတော့ ... လူငယ်တွေ နိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်မယူတော့တဲ့အနေအထားရောက်အောင် ဦးဆောင်နေသူ ဆိုပြီး သူ့ကို မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့ဆိုရင် စွမ်းဆောင်ရည် အားနည်းတယ်လို့လည်း သုံးသပ်ထားပါတယ်။
"စင်္ကာပူနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာ ဂုဏ်မယူပါဘူး" ဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာလည်း ဒီအမြင်နဲ့ သက်ဆိုင်တာတွေကို ဖတ်ရပါလိမ့်မယ်။လီရှန်လွန်းရဲ့ သ၀ဏ်လွှာကို စင်္ကာပူရဲ့ နာမည်ကြီးသတင်းစာ စထရိတ်တိုင်းမ်ရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားသူများ အပြည့်အစုံကို အဲဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
အပေါ်ပုံကတော့ တရုတ်နှစ်ကူးကာလတခုမှာ တွေ့ရတဲ့ ပင်နီဆူလာ ပလာဇာ အတွင်းပိုင်းမြင်ကွင်းပါ။ ဧရာဝတီဘလော်ဂါစည်သူလင်း ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ပင်နီဆူလာ ဆိုတာ စင်္ကာပူရောက် မြန်မာပြည်သား အများအပြား ဆုံဆည်းတတ်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီး အဲဒီမှာ မြန်မာပြည်သားများအတွက် ပစ်မှတ်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေ လုပ်ငန်းတွေ ပြည့်နေပါတယ်။
စင်္ကာပူမှာ မြန်မာပညာတတ်အများအပြား သွားရောက် အခြေချနေထိုင်ကြတဲ့အတွက် ၀န်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့ စင်္ကာပူရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်မှာ မြန်မာတွေလည်း ပါဝင်နေပါလိမ့်မယ်။
စင်္ကာပူလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန အွန်လိုင်းမှာတော့ ဒီကနေ့က တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် အများပြည်သူအားလပ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
တယ်လီနော၏ ပြည်တွင်းမြှုပ်နှံမှု သုံးနှစ်အတွင်း အရင်းကျေမည်ဟု ခန့်မှန်း
မိုဘိုင်းလ် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လိုင်စင် ရရှိပြီးနောက် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ရှစ်လအတွင်း စတင်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေသော တယ်လီနော ကုမ္ပဏီက ဆက်သွယ်ရေး လိုင်စင်ရရှိပြီး သုံးနှစ်အတွင်း အရင်းကျေရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
“ဆက်သွယ်ရေး လိုင်စင်ရပြီး နောက်သုံးနှစ်လောက်မှာ အတိုး၊ အခွန်နဲ့ အခြားကုန်ကျစရိတ်တွေ အရင်းကျေနိုင်ဖို့ မျှော်မှန်းထားတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
လိုင်စင်ကြေးနှင့် လုပ်ငန်းစရိတ်များ ပါဝင်သော စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံခန့် ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး လိုင်စင်ကြေး သီးသန့် ကုန်ကျစရိတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ဖြစ်ကြောင်း တယ်လီနော မြန်မာထံမှ သိရှိရသည်။
အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများ အသုံးပြု၍ သုံးစွဲသူ စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဈေးကွက် အခိုင်အမာ တည်ဆောက်သွားရန် ပြင်ဆင်ထားပြီး မြန်မာဈေးကွက်တွင် အောင်မြင်မှု ရရှိရန် ယုံကြည်သည်ဟုလည်း တယ်လီနော မြန်မာ၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် Petter Furberg က ဆိုသည်။
“သူတို့လည်း အားလုံးတွက်ချက် ပြီးတော့မှ ဝင်လာတာဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပတ်ပတ်လည်က အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ထိုင်း၊ ပါကစ္စတန်၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာ တယ်လီနော ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ စပြီဆိုတာနဲ့ သူတို့ ကွန်ရက်က အာရှတောင်ပိုင်းဒေသ တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းသွားမှာ။ အဲဒီတော့သုံးရ ပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်။ သူတို့ ပိုပေါက်နိုင်တယ်” ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ အငြိမ်းစားအရာရှိ ဦးသန်းဦးက ဆိုသည်။
နော်ဝေအစိုးရက ၅၄ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်သော တယ်လီနော ကုမ္ပဏီက လူတိုင်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို လွယ်ကူ အဆင်ပြေ သက်သာစွာ ကိုင်ဆောင်သုံးစွဲခွင့် ရရှိစေရမည်ဟု ကတိပေးခဲ့ပြီး SIM Card တန်ဖိုး အများဆုံး ၁၅၀၀ ကျပ်နှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခ တစ်မိနစ်လျှင် အများဆုံး ၂၅ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ခေါ်ဆိုခွင့်ပြုမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့အပြင် ငါးနှစ်အတွင်း HSPA နှင့် 4G LTE စနစ်များ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တယ်လီနော၏ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ၂၀၁၄ စက်တင်ဘာလခန့်တွင် စတင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ပထမငါးနှစ်အတွင်း ကုမ္ပဏီမှ အရောင်းဌာန ၇၀,၀၀၀ နှင့် လက်ခွဲဆိုင် ပေါင်း ၉၅,၀၀၀ ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး မိုဘိုင်းလ် ငွေပေးချေမှုများ၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများ၊ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍများအတွက် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ကုမ္ပဏီထံမှ သိရှိရသည်။
ဘယ်သူ့မှ စောက်ဂရုမစိုက်တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် ဗိုဟ်ချုပ်ကြီး (ရုပ်သံသက်သေနှင့်တကွ)
ကိုသာကောင်းနဲ့ မယ်လိုဒီတို့ ရဲ့ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာ ဓာတ်ပုံများ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့မှာ မင်္ဂလာပွဲ ပြုလုပ်တော့မယ့် ငယ်ငယ်ကတည်းက တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်အကုန်သိကြတဲ့ သူငယ်ချင်း ချစ်သူ စုံတွဲ ဖြစ်တဲ့ ကိုသာကောင်းနဲ့ အကယ်ဒမီ မယ်လိုဒီတို့ ရဲ့ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာ ဓာတ်ပုံများကို ပ်ါပြူလာပရိသတ်များအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ - အေးဇော်မိုး(စက်မှု)
မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များမှ နှလုံးသားမဲ့သူများသို့ ပန်ကြားစကား
ဒီမိုကရေစီ ခေတ်နှင့် အညီ ပြည်သူများက မိမိတို့၏ ခံစားချက် များကို နည်းလမ်း မျိုးစုံဖြင့် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် လာကြသည်။ ၄င်းတို့အထဲ တွင် တောင်သူလယ်သမား များ လည်း ပါဝင် လာကြသည် ကို တွေ့မြင်လာရသည်။ တောင်သူ လယ်သမားများမှာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိတို့၏ လယ်ယာမြေများ နစ်နာဆုံးရှုံး ရ၍ ကျေးရွာ တစ်ခုချင်း အလိုက် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ဘဝတူတောင်သူ လယ်သမားများ စုပေါင်း၍ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် လာသည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် မြို့တော် ခန်းမရှေ့၌ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ခဲ့ကြသော အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ တောင်သူ လယ်သမားများ အနက်မှ ၄င်းတို့၏ ပြောဆို ရင်ဖွင့်ချက်များကို စုစည်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
နဂိုကတော့ လယ်လုပ်တာ ငယ်ငယ်လေး ကတည်းကပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ မှာ လုပ်တာက လေးငါးနှစ်လောက် ကြာသွားတာပေါ့။ ပြေစာ ထုတ်ပေးမယ် ဆိုပြီးတော့ ထုတ်ပေး မယ့်နှစ် ကျမှ အဖွဲ့ အစည်းတွေ ကနေ သိမ်းသွားတာပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ နစ်နာကြေး ရတာ ရှိတယ်။ မရတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲ့ဒါတွေ ကို တောင်းဆိုတဲ့ အခါကျတော့ အခု ညောင်တုန်း တရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင် နေရပါတယ်။ အခု အယူခံ ဝင်ထားတယ်။ ညောင်တုန်း တရားရုံးမှာပါ။ ဟိုတုန်းက ၂ဝဝဝ ခုနှစ်လောက် က အဲ့ဒီမှာ နစ်နာကြေး ဆိုပြီးတော့ အစားစား ရကြတယ်။ ဦးလေးက ၁ဝ ဧက အတွက် ၁ သိန်းရ တယ်။ ဦးလေးတူ က ၁ဝ ဧကအတွက် ငါးထောင် ရတယ်။ နစ်နာကြေး ဆိုပြီး တော့ ပြောပြီးပေးတယ်။ ကျေးရွာ ဥက္ကဋ္ဌ အိမ်မှာ ခေါ်ပေးတယ်။ အခုကတော့ အငှား လိုက်လုပ်ရတယ်။
ကျပန်းဆို တော့ စားဝတ်နေရေး က ပြေလည်တယ် လို့ ဘယ် ရှိပါ့မလဲ။ အလုပ်မရှိတော့ လည်း ဒီလိုပဲ လုပ်စားရတာပေါ့။ လယ် မြေရှိ တုန်းက ကျတော့ ကိုယ်လည်း အဆင်ပြေတယ်။ ကိုယ့်မိသားစု အတွက် လည်း ကူ ညီထောက်ပံ့ လို့ ဘာသာရေး သာသနာရေးရော လုပ်လို့ ရတာပေါ့။ ဦးလေး ရဲ့ လယ်က နှစ်ဆယ့်ငါး ဧက ရှိတာ။ ၁ဝဧကအတွက်ပဲ လျော်ကြေးနစ် နာကြေး ရခဲ့တာ။ ၁၅ ဧက က လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ လျော်ကြေး လည်း မရခဲ့ ဘူး။ ဦးလေး တို့က ကိုယ့်မိရိုးဖလာ လယ် သမား သားသမီး ဆိုတော့ လယ်ပဲ လုပ် ချင်တာပေါ့။
ဒီမှာလာပြီး ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ရတာ က ရင်ဖွင့် စကားပေါ့။ တစ်နိုင်ငံလုံး လည်းသိစေချင်တယ်။ နိုင်ငံတော် အကြီး အကဲ ကိုယ့်မိဘလည်း သိစေချင်တယ်။ အောက်ခြေမှာ ပွင့်လင်းမှု မရှိဘူး။ မပြောလည်း မပြောရဲကြဘူး။ ဒီကိုလာ တာတောင်မှ လူတိုင်း မလာရဲကြဘူး။ လျော်ကြေး မရမချင်းတော့ တောင်းဆို နေရမှာပေါ့။ အခု အလုပ်လေး ထွက် လုပ်လိုက်၊ သွားစရိတ် လာစရိတ်လေး ရှာလိုက်၊ စာရွက် စာတမ်းလေးနဲ့ ဟို တင်လိုက် ဒီတင်လိုက်ပေါ့။ ကိုယ်က တော့ နားမလည်ဘူး။ အခုဆို အသက် ကသာ ၅ဝ ကျော်တယ်။ ပညာအရည် အချင်းက နှစ်တန်းပဲ။ မိရိုးဖလာ လယ်နဲ့ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြုမယ် ဆိုတော့ ဒီကြားထဲမှာ ပြောတာ ဆိုတာ လုပ်တာ ကိုင် တာတွေ ကဘာမှ နားလည်တာ မဟုတ်ဘူး။
ပညာ အရည်အချင်းက မူလတန်း ပဲရှိတာကိုး။ ဒီကို မ နက်ခြောက်နာရီကျော် ကထွက်လာ တာ။ ဘဝတူတွေ စုပြီးလာကြတာပေါ့။ စာအုပ် တွေ၊ ဘာတွေဖတ်ဖူးတဲ့ သူတွေက တောင်းဆိုရင် ရတယ်ဆိုပြီး ဖတ်ဖူးတဲ့၊ သိတဲ့ သူတွေက ပြောလို့ ကိုယ်က သွား ကြည့် တိုင်ပင်ကြပြီးတော့ ဖြစ်သင့်ဖြစ် ထိုက် တာလေး၊ ကိုယ့် ခံယူချက်လေးတွေ ပြောကြမယ် ဆိုပြီးတော့ အရဲစွန့်ပြီး လာ ရတာပေါ့။ စိတ်ထဲ မှာတော့ စိုးရိမ်စိတ် တော့ ရှိတာပေါ့။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့် လမ်းလျှောက် တာတောင် မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ က ဘယ်လို မြင်မလဲ၊ ဘယ်လို ပြောမလဲ၊ ဒီမှာဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ နောက်ပိုင်း တစ်ပိုင်းက တော့ သိသွား ရင် ကျေနပ်တယ်။ တို့ဖြစ်တာက ခံလို့ရတယ်။ တို့နောက်ပါ လာမယ့် ကလေးတွေက တို့ထက်ပိုဆိုး သွားမလား ဆိုပြီးတော့ အဲဒါကို တွေးပြီးတော့ ခြေတစ်လှမ်း လှမ်း ပြီးတော့ ဒီအလုပ် လုပ်ထားတာပဲ။
အသိမ်းခံ ရတာ ၁ဝ နှစ်ကျော်ပြီ။ လယ်ဧက ၅ ဧက သိမ်း ခံခဲ့ရတာ။ ၉၆ ခုနှစ်က လယ် စလုပ်တယ်။ ၉၈ ခုနှစ် အထိပဲ လုပ်ရတယ်။ ၉၉ မှာ အသိမ်းခံ ရတယ်။ ကြံ့ခိုင်ရေး က အသိ မပေးဘဲနဲ့ သိမ်းသွားတာ။ လယ်မရှိတော့ ကြုံရာ လုပ်စားနေ ရတာပေါ့။ လယ်ပြန်ရဖို့ အတွက် အဆင့်ဆင့်တိုင်ထားတယ်။ နိုင်ငံ တော် သမ္မတလည်း တိုင်ထား တယ်။ လယ်ယာမြေ ကော်မတီ ကိုလည်း တိုင်ထားတယ်။ ကိုယ့်လယ်တွေ မရှိတော့ ဝမ်းနည်းတာပေါ့။ ဒီလယ်မြေတွေက စီမံကိန်းမြေတွေ ကို တိုင်းမှူး ဦးတင်လှ က နေ မြေမရှိတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ သူတွေကို ပေး သွားခဲ့တာ။ မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေ ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ ရတာ။ အဲ့ဒီမှာ ဒိုက်တွေ ကို ထွန်စက်နဲ့ ထွန်ရ တယ်။ နွားစားတဲ့ ဒိုက်မြက်ကြီး တွေပေါ့။ အဲ့ဒါတွေကို ခုတ်ထွင်ပြီး လုပ်ခဲ့ရတာ။ အခု ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ရေး အတွက် မနေ့က ညနေက တည်းက လာ ခဲ့ရတာ ”ရွှေပြည်သာ က အသိအိမ် မှာ တည်းတယ်။ အဲ့ဒီလယ် မြေတွေ ပြန်ရ ရင်တော့ ချောင်လည်တာ ပေါ့။ လယ်တွေ မရှိတော့ ဒုက္ခရောက် ရတာ စိတ်ဆင်း ရဲရတာပေါ့။
သိမ်းခံရတာက ၉၆၊ ၉၇ လောက် က သိမ်းသွားတာ။ ကျွန်တော်တို့က ၃ ဧက သိမ်းခံရတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း သမ အသင်းစုက သိမ်းသွားတာ။ ကြံစိုက် မယ် ဆိုပြီး သိမ်း သွားတာ။ အဲဒီမှာ ကျွန် တော်က ၃ ဧက ပါသွားတယ်။ အား လုံးပေါင်း ဧက ၃၆ဝ လောက် ပါတယ်။ သူတို့က ကွင်းနံပါတ် ၆၆၈ ကို တစ် ကွင်းလုံး ရတယ် ဆိုပြီး ကျွန်တော် တို့ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ မြေတွေ ပါပါသွားတယ်။ ကနေ့ထက်ထိ ဘာမှလည်း ပြန်မပေး ဘူး။ လျော်ကြေးလည်း ဘာမှ မပေးဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော် ရတာက ဒီ မြေတွေက ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် လုပ်စား ခဲ့ကြတာ။ အခုလည်း တောင်သူတွေပါ ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ လက်ငုတ် လက်ရင်းကို တစ်ပြားမှ မပေးဘဲ ကျွန် တော် တို့ ငုတ်တူးရတယ်။ တောရှင်းရ တယ်။
ဒီလို ငုတ်တူးတောရှင်း ပြီးမှ သူတို့ မြေကွက်ဆိုပြီး မတရားနဲ့ လျော် ကြေးလည်း တစ်ပြားမှ မပေးဘဲ သိမ်းသွားတာ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော် တို့ အထက်ကို စာတင်တယ်။ မြေယာ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ကိုလည်း စာတင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ မြေတွေကို ကျွန်တော် တို့ ပြန် လိုချင်တယ်။ ဒီအတွက် ရန်ကုန်ကို လာတယ်။ ည ၁၂ နာရီ ကတည်းက ထွက်လာခဲ့ရတာ အိပ် ရေးလည်း ပျက်တယ်။ ထမင်း အငတ်ခံ အပင်ပန်း ခံပြီး ကျွန်တော်တို့ ခံစားချက် တွေကို ထုတ်ဖော်ဖို့ လာခဲ့တာပါ။ ကျွန် တော်တို့က တောင်သူတွေ ဆိုတော့ ဘာ မှလည်း မသိဘူး။ နားလည်း မလည် ဘူး။ နားလည်တဲ့ သူတွေက တာဝန်ရှိ တဲ့သူ တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပေးစေ ချင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်တာပါ။ ကျွန် တော်တို့ ဆန္ဒတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သမ္မတဖြစ်မှပဲ ပြည့်မယ်ထင် တယ်။
အခု အစ်ကို တို့က လက်ရှိက တော့ အသိမ်းခံရတဲ့ လယ်မှာပြန်လုပ်နေ တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်တော့ ဒီ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ခြောက် လပိုင်းက စလုပ်တော့ ပုဒ်မ ၄၄၇ နဲ့ တရား စွဲပြီးတော့ ၅ ယောက် အလုပ် ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် နှစ်လစီ ကျကြတာ ပေါ့။ ဒီလယ်တွေကို ၁၉၈၁ လောက်က အစ်ကို့ မိဘတွေ လက်ထက်က သိမ်းသွား တာ။ အဲဒီလို သိမ်း သွားတော့ အစ်ကိုတို့ မိသားစုက အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်သွားတာ ပေါ့။ အသိမ်း မခံရရင်တော့ အစ်ကိုတို့ လူတန်းစေ့ နေနိုင်တာပေါ့။ အသိမ်းခံ ရတဲ့ လယ် ဧက ပေါင်း ကတောင်သူ ၆၂ ဦး အသိမ်းခံရပြီး ဧကပေါင်းက ၄၆ဝ ဒသမ ဝ၈ ဧက အသိမ်းခံ ထားရတယ်။ ဒီလယ်ဧကတွေ ကို ကိုယ့် တစ်မြို့နယ် တည်း မဟုတ်ဘူး။ အသိမ်းခံ ရတဲ့ လယ် ဧကတွေ အကုန်လုံး ပြန်ရအောင် မရ မချင်း တောင်းဆိုမှာပါ။ ဒီမြေတွေသိမ်း တော့ အကြမ်းဖက်တာ ရှိတယ်။ ဒီတောင် သူတွေ စိုက်ထားတဲ့ စိုက်ခင်းတွေ ကို ထွန် စက်တွေ နဲ့ ဝင်ပြီး စက်မှု (၁)က ဖျက်ဆီးတယ်။ ခရိုနီတော့ မပါဘူး။ အခုကျ တော့ ဘယ်လို ဖြစ်လဲ ဆိုတော့ တာဝန်ခံ ဒေါ်တင်မာဖြူ က ဝါးခယ်မမြို့နယ် အရှေ့ ခြမ်း မှာရှိတဲ့ လုပ်အားပေး ခေါ်တူးထား တဲ့ ရေတံခါး ဆည်မြောင်းကို အင်းမြောင်း ရောင်းချနေတယ်။ လယ်ယာမြေတွေကို ပိုက်ဆံ ရှိတဲ့ ခရိုနီတွေကို အဖိုးအခ နဲ့ ငှားစားနေ တယ်။ ဒီလယ်မြေတွေကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြေစာတွေ ရှိတယ်။
အရင်က ဂုန်လျှော်တွေ ရောင်းထားတဲ့ဖြတ် ပိုင်းတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒီအဖမ်း ခံရတဲ့ လူတွေကို လည်း မြို့နယ် ရဲမှူးကြီးက လယ်ယာမြေ ရရှိရေး အတွက် ခေါ်ပြီး လက်မှတ် ထိုးခိုင်းတယ်။ ပထမတော့ မထိုးဘူးပေါ့။ မထိုးတော့ တရားစွဲလို့ မရဘူး။ စခန်းမှူး ကခေါ်ပြီး လယ်ယာ မြေ ရရှိရေး အတွက်ဆိုပြီး လိမ်ပြီး လက် မှတ် ခေါ်ထိုး ခိုင်းတယ်။ တောင်သူတွေ ကတော့ အဆင်ပြေတယ် ဆိုပြီး ထိုး လိုက်တာ။ စာမတတ်ဘူးလေ။ ပြီးမှ တရားစွဲ လို့ရသွားတာ။ ဒီလယ်ယာမြေ တွေ ပြန်ရမယ် ဆိုရင် နိုင်ငံတော်ရော၊ ပြည်သူ တွေရော အကျိုး ရှိတယ်။ အခု သူတို့ စိုက်ပျိုးလို့ ရတယ် ဆိုတာ ကိုင်း တောမြက် တောတွေဖြစ်နေတာ။ သူတို့ က ခြေမနိုင် လက်မနိုင်လေ။ နိုင်ငံတော် အတွက် နစ်နာတာပါ။ တောင်သူတွေ လက်ထဲ ရောက်မယ် ဆိုရင် ရှင်းမယ် လင်း မယ် ဆိုရင်ပဲ တို့စပါးတို့ စိုက်ရင် သီးနှံတွေလည်း ရရှိတာပေါ့။ လယ်ယာ မရှိတော့ဘူး ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက ဆန် ဈေးကွက် ပဲကြည့် နောက်ဆို တခြား နိုင်ငံတွေကပါ ဝယ် စားနေရမှာပေါ့။
တောင်သူတွေ မြေတွေကို သိမ်း ထားလို့ ပြန်ရရေး လုပ်နေတာ။ ၂၃ နှစ် ရှိသွားပြီ။ ကိုယ့်လယ်ကို အသိမ်းလည်း ခံရသေး နေ့စားနဲ့ ပြန်လုပ်နေ ရတယ်။ ကိုယ့်မြေ ကို ပြန်လုပ်ဖို့ ဝင်တိုးပြီး လုပ်တဲ့အခါ တောင်သူတွေကို ဖမ်းပြီးတော့ အချုပ်ချ ထားတယ်။ ပြန်ပြီးတော့ မလွှတ်သေးဘူး။ အဲဒါတွေ မခံနိုင်လို့ ဆန္ဒ ပြတောင်းဆိုနေ ကြတာပါ။ ကိုယ့်မြေ လည်း ပြန်လိုချင်တာပေါ့။ အခုတော့ အန်တီ တို့က သူတို့ အလုပ်ကိုပဲ နံနက် ၆ နာရီကနေ ညနေခင်း ၆ နာရီ အထိ လုပ်ရတယ်။ တစ်နေ့ကို နေ့စား ကျပ် ၂ဝဝဝ ပေးတယ်။ ဒါတောင် သူတို့ ဝန်ထမ်းက ကျပ် ၂ဝဝ ဖြတ်စားလို့ ကျပ် ၁၈ဝဝ ပဲ ရတယ်။ ဒီလို လုပ်စားတော့ ဘယ်လို ချမ်းသာမလဲ။ စားအိုး ကြီးပြီး ပိုငတ် သွားဖို့ပဲ ရှိတယ်။ အခုက ဖြစ်နေ တာက သူတို့ လယ်ကို သီးစားခနဲ့ တစ် ဧကကို စပါး ၂ဝ ပေးစားရတယ်။ ငွေနဲ့ ဆို ကျပ် ၃၅ဝဝဝ လေ။ စစ သိမ်းတော့ သကြား စက်ဆောက်ဖို့ အတွက် ဧက ၇ဝဝဝ ကျော် သိမ်းတယ်တဲ့။ အဲဒီကနေ တဖြည်းဖြည်း နဲ့များလာတာ။
အဲ့ဒီလယ် တွေ ဆိုတာကလည်း တောကို တိုးပြီးတော့ ကိုယ့် ဘာသာကို ကျွဲ၊ နွားမရှိတော့ ပေါက်တူးလေး နဲ့ပေါက်ပြီး လုပ်ထားလာ တာ။ ပြောင်လည်း ပြောင်ရော သကြား စက်ကြီး တည်တယ် ဆိုပြီး သိမ်းတာ။ အန်တီ အစက နဂို ကနည်းနည်းလေး အဆင်ပြေနေတာက ငတ်သထက်ငတ် သွားတာပေါ့။ လျော်ကြေးလည်း မရ ဘူး။ သူတို့က ကောင်းတာ ဆို ကြီးတဲ့လူ က စားတယ်။ မကောင်း တာတွေကိုကျ တော့ ငယ်တဲ့ လူတွေကို ချပေးတယ်။ ဒီ မြေတွေကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်က သိမ်းတာ လေ။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း မှာ ပေးမယ်ပေး မယ်ဆိုပြီး ပြောတယ်။ ပြီးတော့ ကုမ္ပဏီ ပိုင် ဆိုပြီး ပြောတယ်။ ကိုယ့်မြေလေး ကိုယ်တစ်လက်မ ရှိလည်း တစ်လက်မ လုပ်စားချင်တယ်။
အလုပ်ကတော့ ကားလိုက်တာ ပေါ့။ ဒီဟာက ကျွန်တော်တို့ ဘိုးဘွား ပိုင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြောက်ဥက္ကလာ ဆင်ဖုံ ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်လောက်က သိမ်း တာ။ ဒီမြေတွေ သိမ်းတော့ နေရတာက တော့ ဘိုးဘွားတွေက ဟိုမှာ ပဲနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သမိုင်းမှာ ငှားနေတာ။ လယ်ဧကပဲသိမ်းတာ။ လယ်ဧက ဘိုးဘွား တွေ အမွေပေးထား တာ ဧက ၃ဝဝ ကျော်တယ်။ အခုက စက်မှုဇုန် ဒေသကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး အစိုးရ အဖွဲ့က တစ်ဧကကို သိန်း ၉ဝဝ သတ်မှတ်ပေး ထားတယ်။ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ လည်း ရောက်ရှိမလာသေးဘူး။ လွှတ် တော်ထိလည်း တင်ထားတယ်။ ဝန်ကြီး ဌာနတွေရော၊ သမ္မတ ရုံးထိ တင်ထား တယ်။ လာစစ်မယ်ဆို ပြီးဘာမှ မထူးဘူး။ ဒီ လယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလယ်တွေ ရဲ့ အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ ပြေစာတွေ ရှိတယ်။
ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို မတရား အသိမ်းခံ ထားရတော့ မကျေနပ်ဘူး။ တန်ရာ တန်ကြေး ပေးရင်တစ်မျိုးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ဒီစက်မှုဇုန်ထဲ က တစ် ယောက်မှ ပြန်မရသေးဘူး။ ၁၉၉၂ မှာသိမ်းတာ ဇေ ကမ္ဘာ နဲ့ အိုးအိမ် အကျိုး တူ စီးပွားဆိုပြီး ရွာတွေ ပါ ဖျက်ပေး လိုက်ရတာ။ သူတို့ က ဒီလယ်မြေတွေကို သူတို့က ၁၅ဝဝ၊ ကျပ် ၂ဝဝဝ နဲ့ရောင်း တယ်။ အဲဒီတော့ တန်ရာ တန်ကြေးရ အောင် ကြိုးစားရမယ်။ မရ ရအောင် ကြိုး စားရမယ်။ ဒီလယ်တွေကို ပြန်ရအောင် ရွာမှာရှိတဲ့ သူတို့ သိမ်းထားတဲ့ ဘုန်းကြီး ကျောင်း မြေ လယ်ဧက ၅ ဧကလောက် ရှိတာ ၂ ဧက သာသာလောက် ပါ သွား တယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဘေးက မြေ ရရင်တော့ ပြန်ဆောက်ပေးဖို့ ကြိုး စားထားတယ်။
အိမ်စည်စိုးစံ၊ ဇေဝေယံ စုစည်းတင်ပြသည်
အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းရှိကားဂိတ်တွင် အငှားယာဉ်များပိတ်ဆို့ ရပ်တန့်ထားသဖြင့် ဖယ်ခိုင်းရာမှခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား
၃၀.၁.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၀၂၃၀အချိန် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးဝင်းရှိ ရွှေစင်စင်္ကြာကားဂိတ်မှ ဂိတ်မှူး ဦးထင်လင်းသည်
ရွှေစင်စင်္ကြာကားဂိတ်၌ရှိနေစဉ် ၎င်းတို့ယာဉ်လိုင်းမှခရီးသည်တင်ယာဉ်မှာ ဂိတ်သို့ဆိုက်ရောက်လာချိန် ယာဉ်ရပ်နားမည့်နေရာ၌ တက္ကစီယာဉ်များ ပိတ်ဆို့ရပ်တန့်ထားသည့်အတွက် အဆိုပါခရီးသည်တင်ယာဉ်၏ ယာဉ်နောက်လိုက်များဖြစ်သော ကိုအောင်သူနှင့်ကိုအောင်ကိုလတ်တို့မှ ပိတ်ဆို့ရပ်တန့်ထားသည့်တက္ကစီယာဉ်များအား ဖယ်ခိုင်းခဲ့ရာ တက္ကစီ ယာဉ်မောင်းများဖြစ်သည့် စိုးမိုးအောင်ပါ(၆)ဦးခန့်က ညစ်ညမ်းစွာ
ဆဲဆိုကာ ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ခဲ့ကြသည့်အပြင် ရွှေစင်စင်္ကြာကားဂိတ်
အတွင်းသို့ အုတ်ခဲများဖြင့်ပစ်ပေါက်ခြင်း၊ ထိုင်ခုံများအားရိုက်ချိုးခြင်း၊
ယင်းသို့ ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့်အတွက် ကိုအောင်သူတွင်ဦးခေါင်းဖူးရောင်ဒဏ်ရာ၊ ကိုအောင်ကိုလတ်တွင် ယာမျက်လုံးဖူးရောင်ညိုမဲ၊ ၀ဲခြေဖမိုးရိုးကျိုးဒဏ်ရာ များရရှိခဲ့ပြီး ဂိတ်အတွင်းမှပစ္စည်းများတန်ဖိုး စုစုပေါင်း(၁)သိန်းကျော်ခန့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့သောကြောင့် အရေးယူပေးပါရန် ဦးထင်လင်းမှ တိုင်တန်း ခဲ့သဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူစိုးမိုးအောင်ပါ(၆)ဦးခန့်အား မင်္ဂလာဒုံမြို့မ
ရဲစခန်း (ပ) ၄၉/၂၀၁၄၊ ပုဒ်မ ၂၉၄/၃၂၅/၄၂၇/၁၁၄ ဖြင့်အမှုဖွင့်ကာ ဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အမေရိကန် ဒုက္ခသည် အစီအစဉ် ရပ်ဆိုင်းမှုဂယက် ကျယ်ပြန့်...
မန္တလေးတိုင်း၌ ကျောင်းသားများကို အိုင်တီနှင့် အီလက်...
မြိတ်မြို့၊ မြိတ်တောင်နယ်မြေ၌ အရက်သေစာ သောက်စားမူး...
အမျိူးသမီးများ တန်းတူ အခွင့်အရေး မရရှိလျှင် နိုင်င...
ပြည်တွင်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အာရှကိုးနိုင်ငံမှာ သယ်ယ...
ရခိုင်ပြဿနာ အစိုးရက ဘက်လိုက်နေရင် ယုံကြည်ထိုက်မှုေ...
၅ နှစ်အတွင်း လူဦးရေ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း ဖုန်းကိုင်နို...
လက်ပံတောင်းတောင်အရေး အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှု ၁၄ လပြည်...
ရခိုင်ပဋိပက္ခအပေါ် မှားယွင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ဗြိတိ...
၂၀၁၄ မြန်မာ နေရှင်နယ်လိဂ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ ပြန...
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများ ဘတ်ဂျက်မျှ သုံးပေးရန် ဝန်...
ပြည်သူများကို သူတောင်းစားလိုဖြစ်အောင် အစိုးရလုပ်နေ...
ရီဟန်နာနှင့် ပူးပေါင်းဖန်တီးသည့် သီချင်းအကြောင်းေ...
တယ်လီနော၏ ပြည်တွင်းမြှုပ်နှံမှု သုံးနှစ်အတွင်း အရင်...
ဘယ်သူ့မှ စောက်ဂရုမစိုက်တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် ဗိုဟ်ချ...
ကိုသာကောင်းနဲ့ မယ်လိုဒီတို့ ရဲ့ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရ...
မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များမှ နှလုံးသားမဲ့သူများသို့ ပန်ကြား...
နိုင်းနိုင်းရဲ့ ဇနီး စန္ဒီချို စတုတ္ထမြောက်ရင်သွေးလေ...
ပဋ္ဌာန်းမရွတ်မီ အဓိဋ္ဌာန်ပုံ သစ္စာပြုပုံ နှင့် ပဋ္ဌာန်း(၂...
ဧရာဝတီ တံတားကြီး (ပခုက္ကူ) အနီး ရှေးဟောင်း မြပုခက်ဘ...
ဆိုးသွမ်းဘောလုံး ပရိသတ်များကို ထိန်းသိမ်းရန် မြန်မ...
အမေရိကန် အကြံပေးအရာရှိ မြန်မာနိုင်ငံ လာမည်
မစ်စတာဘင်းမှ အတုယူရန် သင်ခန်းစာ
Facebook အကောင့် လော့ကျရခြင်း အကြောင်းအရင်း
ဟောင်ကောင် အတိုက်အခံတို့ ရောင်းတဲ့ အိမ်သာသုံးစက္ကူ ...
Angry Birds ဂိမ်းဆိုက်၊ ဟက်ကာနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအရှုပ...
ထိုင်းနယ်စပ်က မြန်မာ ဒုက္ခသည်တွေ အုပ်စုလိုက် အခြေချ...
သြော် ၊ ဟုတ်လား၊၊ ဒါနဲ့ . . ပြောရအုံးမယ်။ ။ ဟဲ … ဟ...
Android Q & A (အန်းဒရွိုက် အမေးအဖြေ)
ဆက်စပ် Digital ပစ္စည်းများ
ကားအတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည့် Apple iOS ဓာတ်ပုံများ ...
၂၀၁၃ ခုနှစ် အဆိုးရွားဆုံး password အဖြစ် 123456 သတ...
Pages Manager iOS တွင် ဓာတ်ပုံပို့စ်များကို Schedu...
BitTorrent နှင့် NFL အသင်းများအီးယူ၏ privacy ကိုချ...
သမ္မတဖြစ်ခွင့် အရည်အချင်း ကန့်သတ်ချက် ဖယ်ရှားရန် ဗြ...
မြန်မာ-ဂျပန် လေကြောင်းလိုင်း သဘောတူ စာချုပ်ပြင်ဆင်
ဒုချီးရားတန်းရွာ မီးရှို့မူ ရဲတွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်...
The Trade Times ( Vol-2, No-94 ) - ကုန်သွယ်ရေး၊ စီ...
Auto World Journal ( Vol-3, No-6 ) (ရွေ့လျားသွားလာ...
အခြေခံဥပဒေပြင်ရေးမှာ ပွင်လင်းဖို့ ဗြိတိန်ဒုဝန်ကြီး...
သတိထားဖွယ် အထင်လွဲလျှင် အသက်ဆုံးရှုံးတတ်ပုံ
ချစ်သူတွေ ကျော်ဖြတ်ရတဲ့ အဆင့် ( ၇ ) ဆင့်
အဆိုတော်လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေ တို့ စုံတွဲရဲ့ ခရစ်ယာ...
တရုတ်ဂက်(စ်)ပိုက်လိုင်း အဆောက်အအုံမီးရှို့ခံရ ငဖဲမှ...
၅မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးဖတ်ကြည့်ပါလား ခင်ဗျာ အကျို...
ရေစိုခံ သေးသွယ်ကျစ်လျစ်သော Sony Xperia Z1
အမြစ်တွယ် ငွေခဝါသည် ဇာတ်လမ်း